ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ | Lottery.com
Last updated: မေလ 4, 2020
Lottery.com (“ Company”,“ we” or“ us”) ကိုကြိုဆိုပါသည်။ အောက်ပါအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်အခြေအနေများသည်ရည်ညွှန်းခြင်းဖြင့်ဖော်ပြသောမည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ (စုပေါင်း၍ ဤ“ အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းများ”) သည်သင်နှင့်သင်ကိုယ်စားပြုသည့်မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း (စုပေါင်း၊ “ သင်” သို့မဟုတ်“ သင်၏”) ကိုအုပ်ချုပ်သည်။ အသုံးပြုခွင့်ကိုလေးစားခြင်း www.lottery.com မည်သည့်အကြောင်းအရာ (ဝန်ဆောင်မှုသဘောတူညီချက်၏ဤဝေါဟာရများမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း) အပါအဝင်, နည်းပညာ, လုပ်ငန်းစဉ်များ, ပစ္စည်းများ, လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ, ဒီဇိုင်းကိုကမ်းလှမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မှတဆင့်ကုမ္ပဏီအားဖြင့်စျေးကွက် Lottery.com နှင့် such ည့်သည်သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူအနေဖြင့်ဖြစ်စေ ၀ န်ဆောင်မှုများ (စုပေါင်း၍“ ၀ န်ဆောင်မှု”) ကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်အသုံးပြုသောအခြားအခြားဒိုမိန်းအမည်များတွင်။
အရေးကြီးဥပဒေဆိုင်ရာသတိပေးချက်များ: သူတို့သည်သင်၏ဥပဒေအခွင့်အရေးများနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများအပေါ်သက်ရောက်မှုဂရုတစိုက်အသုံးပြုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုဖတ်ရှုပါ။ LOTTERY.COM မဆို STATE ထီ OR အစိုးရအေဂျင်စီတွေနဲ့ဆက်နွယ်ခြင်းမရှိပါ။ သင်အသုံးပြုဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသဘောမတူဘူးလျှင်, ဝန်ဆောင်မှုများကိုရယူနိုင် OR အသုံးမပြုပါနှင့်။
၀ န်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှု (“ အကောင့်”) မှတဆင့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခြင်း၊ Lottery.com App ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်း (သို့) ဤရွေးချယ်မှုအားသင်ရရှိနိုင်သည့်အခါဤအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုလက်ခံရန်သို့မဟုတ်သဘောတူရန်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်ဤစည်းကမ်းချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်နှင့်လိုက်နာရန်သင်ဖတ်ရှုရန်သဘောတူခဲ့ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုပြီး (၂) သင် ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားကြောင်းနှင့်ဤအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များရှိသည်ကိုကိုယ်စားပြုပြီးအာမခံသည်။ ဤစည်းကမ်းချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရခိုင်းစေလိုပါကဤ ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ င်ရောက်အသုံးမပြုရပါ။ ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စည်းကမ်းချက်များကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုရယူအသုံးပြုခြင်းကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။
2.1 ။ အရည်အချင်းပြည့်မီ
အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှု၏မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူဖြစ်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်သင်မှတ်ပုံတင်သည့်အချိန်တွင် (၁) အနည်းဆုံးအသက် (၁၈) နှစ် (သို့) သင်၏နေထိုင်ခွင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်မြေတွင်အများစု၏အသက်အရွယ်ဖြစ်ရမည်။ (၂) မည်သည့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဥပဒေများအောက်တွင် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ပါ ၀ င်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားသူမဟုတ်ပါ။ (၄) ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုအချိန်တိုင်းလိုက်နာရမည်။
သငျသညျထီလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အသက်တဆယ်ရှစ် (18) နှစ် (ပုဒ်မ 4.1 မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း) ထက်အဟောင်းတွေဖြစ်ရန်သင့်အားလိုအပ်သည်တစ်စီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်းနေထိုင်ပါလျှင်, သင်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက်စီရင်ပိုင်ခွင့်ရဲ့ဥပဒေများကိုလိုက်နာရပေမည်။ သင်တို့သည်ဤလိုအပ်ချက်များကိုအားလုံးဖြည့်ဆည်းမထားဘူးဆိုရင်, သင်ဝန်ဆောင်မှုရယူသို့မဟုတ်အသုံးမပြုရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည့်အချိန်တွင်မဆိုသင့်ရဲ့အသက်, ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်ရထိုက်ခွင့်ကိုအတည်ပြုရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤအမှု၌ယင်းကုမ္ပဏီနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်မဆိုပျက်ကွက်ရပ်ဆိုင်းမှုနှင့် / သို့မဟုတ်သင့်အကောင့်ကိုအဆုံးသတ်ပိတ်ပစ်လိမ့်မည်။
ဝန်ထမ်းများ, အရာရှိများ, ဒါရိုက်တာများ, အဖွဲ့ဝင်များ, မန်နေဂျာများ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ, အေးဂျင့်များနှင့်ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များနှင့်၎င်း၏သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မိဘကုမ္ပဏီများ, ခွဲများ, affiliates အဖြစ်တိုက်ရိုက်နည်းပညာရောင်းချသူ, content တွေကိုပံ့ပိုးအစိတ်အပိုင်းပေးသွင်းသူများ (ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲနှစ်မျိုးလုံး) ၏ကိုမဆိုတိုက်ရိုက် အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်, သူတို့သက်ဆိုင်ရာချက်ချင်းမိသားစု (မိဘများ, အိမ်ထောင်ဖက်, မိတ်ဖက်များနှင့်ကလေးများအဖြစ်သတ်မှတ်) နှင့်အတူတူပင်အိမ်ထောင်စုများတွင်နေထိုင်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်မရှိကြပေ။ ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များ, သို့သော်, လုပျငနျးစမ်းသပ်န့်အသတ်ခြင်းမရှိဘဲ, အပါအဝင်ကုမ္ပဏီ၏တစ်ဦးတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ, နှင့်အခြားကျိုးကြောင်းဆီလျော်တရားမျှတတဲ့အသုံးပြုမှုအကဲဖြတ်၏ရည်ရွယ်ချက်အဲဒီလိုအခြိနျမှနျမှအဆိုပါဝန်ဆောင်မှုနှင့်အလိုတော်ကိုရယူနိုငျသညျ။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုရယူသုံးသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်ကိုယ်စားပြုခိုင်လုံသငျသညျကိုအသုံးပြုခြင်းဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအပေါငျးတို့သလိုက်နာဖို့, ဒီသဘောတူညီချက်ထဲသို့ဝင်ခွင့်, လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်, သင်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူသုံးသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းမှတားမြစ်ထားသောကြသည်မဟုတ်ကြောင်း ။ ကုမ္ပဏီမဆိုဤကဲ့သို့သောကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ်အာမခံလုပ်ဖို့အခွင့်အာဏာရှိရကြလိမ့်မည်နှင့်အတူကုမ္ပဏီ, လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်နွယ်ခြင်းမရှိလူတစ်ဦးကိုဝင်ရောက်သို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်သင်၏ဥပဒေရေးရာညာဘက်အဖြစ်သွယ်ဝိုက်သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမျှကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ်အာမခံစေသည်, ဒါမှမဟုတ်ဆက်နွယ်မှုဟုဆိုကာ။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုပါဝင်မှုတားမြစ်ထားသောသို့မဟုတ်ကန့်သတ်စေခြင်းငှါအရာအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာလက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကအသုံးပြုခံရဖို့အဘို့ကျနော်တို့ရည်ရွယ်ကြပါဘူး။ သင်က of Service ကိုရရှိနိုင်မှုထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများတားမြစ်ထားသောသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ထားတဲ့အတွက်မဆိုစီရင်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာ of Service ကိုအသုံးပြုမှုအတွက်ကုမ္ပဏီအားဖြင့်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခု, တောင်းနိုင်အောင်သို့မဟုတ်ဖိတ်ကြားချက်ကိုဖွဲ့စည်းမထားဘူးကြောင်းသဘောတူသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်မည်သူမဆိုဖို့ Service ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
2.2 ။ လိုက်နာခြင်း
သင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောအခါဤသဘောတူစာချုပ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားလုံးကိုလိုက်နာရမည်။ ဝန်ဆောင်မှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်အသုံးပြုသူသည်အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်ဥပဒေအရသာတရားဝင်သည်။ သင်၏ဒေသတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တရား ၀ င်ကြောင်းသေချာစေရန်သင့်တွင်တာဝန်ရှိသည်။ Lottery.com မှအပြုအမူအား လက်ခံ၍ မရပါကကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အသုံးပြုသူအကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်မမှန်ကန်သော (သို့) လက်ရှိအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုချိုးဖောက်ပါကကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အသုံးပြုသူအကောင့်ကိုဆိုင်းငံ့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ လက်ရှိအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတင်းကြပ်စွာမလိုက်နာသောအကောင့်တစ်ခုမှရရှိသောမည်သည့်နိုင်ငွေကိုမဆိုအနိုင်ခံရလျှင်ထိုနိုင်ငွေ၏အခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။
2.3 ။ ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲများ၏အသိပေးစာ
အဆိုပါကုမ္ပဏီအသငျသညျမှအကြောင်းကြားစာနှင့်အတူသို့မဟုတ်မရှိဘဲအချိန်မရွေး Service ကိုပြုပြင်မွမ်းမံလိမ့်မည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီနှင့်အပါအဝင်ယင်း၏အကြောင်းအရာ, န့်အသတ်ခြင်းမရှိဘဲ, သတင်းအချက်အလက်, ဂရပ်ဖစ်, ထုတ်ကုန်, features တွေ, လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်လင့်များ (စုပေါင်းက "အကြောင်းအရာ") အသိပေးစာမပါဘဲ, ပြောင်းလဲသွားတယ်ဖျက်ပစ်သို့မဟုတ် updated နိုင်ပါသည်။ Lottery.com, ရပ်ဆိုင်းကြောင်းရပ်ဆိုင်းရန်သို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံသည့် Service ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မအသိပေးစာမပါဘဲနှင့်ကုမ္ပဏီဝင်ရောက်ခွင့်ခွင့်ပြုခံရဖို့ဆက်လက်လျှင်ပင်၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိအတွက်မဆိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်အချိန်မရွေးဝန်ဆောင်မှုရန်သင့်သုံးစွဲနိုင်, ပိတ်ဆို့အဆုံးသတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်ဆိုင်းရန်စခွေငျးငှါဖြစ်နိုင်သည် အခြားသူတွေ။
2.4 ။ လက်မှတ်တွေ
လက်မှတ်တွေကုမ္ပဏီအားဖြင့်လုံခြုံမည်ဖြစ်ပြီးဖြန့်ဝေမည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ထီပုံဆွဲဘို့လက်မှတ်တွေကြိုတင်သက်ဆိုင်ရာပုံဆွဲရန် posted လက်မှတ်ဝယ်ယူ cut-off အချိန်ကဝယ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကြိုးပမ်းတစ်ဦးချင်းစီမှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူရဲ့တောငျးဆိုခကျြ၏စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်လက်မှတ်တွေဆည်းပူးသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အားထုတ်မှုစေ။ သို့သော်လက်မှတ်တွေကုမ္ပဏီ၏တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပတွင်အပါအဝင်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်ဝယ်ယူမရပေမယ့်လက်မှတ် cut-off အချိန်ကန့်သတ်ဘဲ, ပြင်းထန်သောရာသီဥတု, ပါဝါပြတ်တောက်သို့မဟုတ်အခြားပြဿနာနိုင်လျှင်, ထိုကုမ္ပဏီသည်များအတွက်လက်မှတ်များဝယ်ယူပါလိမ့်မယ် ရရှိနိုင်ပါလာမယ့် drawing နဲ့သူတို့ရဲ့လက်မှတ်တွေသက်ဆိုင်ရာဆွဲဘို့ဝယ်ယူကြသည်မဟုတ်သောထိခိုက်မှတ်ပုံတင်ပြီးအသုံးပြုသူကိုအကြောင်းကြား။
အဆိုပါလက်မှတ်များလုပ်ငန်းများ၌နှင့်သုံးစွဲသူများအွန်လိုင်း၎င်းတို့၏လက်မှတ်နံပါတ်များကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြု posted လိမ့်မည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုလက်မှတ်များအတွက်နံပါတ်များကိုလည်းကြည့်ရှုရန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်အသုံးပြုသူများများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုအပေါ် posted လိမ့်မည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသက်ဆိုင်ရာထီရေးဆွဲများအတွက်အနိုင်ရနံပါတ်များကိုမှတ်တမ်းတင်လိမ့်မယ်။ ထိုအဖြစ်အပျက်အတွက်မမှန်ကန်သောအချက်အလက်အသုံးပြုသူတစ်ဦးထံသို့စေလွှတ်သည်အသုံးပြုသူဤအချက်အလက်များ၏ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းပေါ်အခြေခံပြီးမည်သည့်ပြောဆိုချက်ကိုခွင့်မရကြလိမ့်မည်။ သငျသညျခကျြခငျြးမှားအချက်အလက်များ၏ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းပေါ်မှာကုမ္ပဏီအကြောင်းကြားနှင့်ဤဥပဒေထိုကဲ့သို့သောမှားအချက်အလက်များ၏လက်ခံရရှိများအတွက်ကုမ္ပဏီဆန့်ကျင်မည်သည့်ပြောဆိုချက်ကိုလည်စေရန်သဘောတူသည်။
ထီလက်မှတ်တွေသာခွင့်ထီအေးဂျင့် / လက်လီအရောင်းဆိုင်များအားဖြင့်ရောင်းချခဲ့နိုင်ပါတယ်နှင့်ပြည်နယ်လိုင်းများကိုဖြတ်ပြီးရောင်းချခဲ့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ထီလက်မှတ်တွေကျနော်တို့ဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်ကြောင်း Lottery.com သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီကိုသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အတွက်အခွင့်ရထီအေးဂျင့် / လက်လီအရောင်းဆိုင်ထံမှ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်တဦးတည်းအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်ဝယ်ယူနေကြသည်။ အဆိုပါအနိုင်ရရှိတဲ့အနိုင်ရထားရာအဆိုပါပြည်နယ်ဆုရှင် (s) ၏ဝိသေသလက္ခဏာပေးထားနိုင်ပါသည်။ Lottery.com လုပ်ငန်းအပေါ် created အသုံးပြုသူတစ်ဦးသို့မဟုတ်မည်သည့် lotto အကောင့်ကပိုင်ဆိုင်မဆိုတစ်ဦးချင်းစီလက်မှတ်သို့မဟုတ်လက်မှတ်များအတွက်ဝေစုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ပညတ်တရားအားဖြင့်တားမြစ်ထားသောရှိရာအားလုံးဝယ်ယူမှုပျက်ပြယ်ဖြစ်ကြသည်။
2.5 ။ ဆုကြေးငွေ & ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေနှိမ်
ပညတ်တရားအားဖြင့်အဘယ်မှာသက်ဆိုင်သောသည်ကုမ္ပဏီကပြဌာန်းနှိမ်နှင့် / သို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်ရန်မဆိုအနိုင်ရရှိတဲ့များ၏ငွေပေးချေမှုလက်အောက်ခံပါလိမ့်မယ်။
2.6 ။ ထီပေါက်
Jackpot ဆိုသည်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသတ်မှတ်ထားသောထီတာ ၀ န်ရှိသူများမှသာရွေးနုတ်နိုင်သည့်ထီဆုကိုဆိုလိုသည်။ မှတ်ပုံတင်သည့်အချိန်တွင်သို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီအသစ်ပြောင်းသည့်အတိုင်း၎င်းတို့၏အကောင့်အတွက်ပေးထားသောအီးမေးလ်လိပ်စာတွင်အသုံးပြုသူအားဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့် jackpot အနိုင်ရကြောင်းကုမ္ပဏီကကုမ္ပဏီအားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီအားတုန့်ပြန်ရန်နှင့်ဥပဒေအရလိုအပ်သောနှင့် / သို့မဟုတ်လိုအပ်သောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုပေးရန်ကန ဦး အကြောင်းကြားစာကိုအီးမေးလ်ပို့သည့် နေ့မှစ၍ အသုံးပြုသူများသည်ရက်ပေါင်း (၃၀) ကြာလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည့်ထီအရာရှိများမှရရှိသောငွေများကိုရရှိရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ အုပ်စုလိုက်ကစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဂျက်တုတ်များသည်အုပ်စု၏သုံးစွဲသူများအားလုံးအားတစ်ကြိမ်တည်းငွေပေးချေခြင်းနှင့်ထီလက်မှတ်ဝယ်ယူထားသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများအရခွဲခြားလိမ့်မည်။ ဖြန့်ဖြူးခြင်းမပြုမီပြည်နယ်ထီကအခွန်များအပြင်ပြဌာန်းထားသည့်အခွန်ဆောင်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းများကိုသင်ဤအားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုလက်ခံသည်။
တစ်ဦး "ထီပေါက်" စဉ်းစားကြသည်မဟုတ်သမျှသောအခြားအထီအနိုင်ရရှိတဲ့, အထီလက်မှတ်ဝယ်ယူရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏စည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းနှင့်အညီအခြေချနေထိုင်နေကြပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအသငျသညျခွင့်ရှိသည်စေခြင်းငှါ၎င်း, သင်သည်သင်၏ထီအနိုင်ရရှိတဲ့ရွေးနှုတ်တော်မူရန်သင့်ရွေးချယ်မှုအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်ဆိုအနိုင်ရရှိတဲ့သင်အကြောင်းကြားရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့တစ် ဦး ချင်းစီအနိုင်ရရှိလျှင် သို့မဟုတ် Group Play အနိုင်ရရှိခြင်း သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်မှသတ်မှတ်ထားသောဆုတောင်းဆိုမှုသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းအတာနှင့်ညီသည်သို့မဟုတ်ကျော်လွန်ပါကကုမ္ပဏီသည်သင့်အားတရားဝင်ထီတောင်းဆိုမှုပုံစံကိုသင့်အားပေးပို့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ငွေပေါ်တွင်သက်ဆိုင်ရာနိုင်မှုများစုဆောင်းခြင်းကိုလွယ်ကူစေရန်ကုမ္ပဏီသို့ဖြည့်ရန်၊ လက်မှတ်ထိုးရန်နှင့်ပြန်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်သင့်အဖွဲ့၏ ကိုယ်စား။
ထီလောင်းကစားပြုလုပ်သောနိုင်ငံတွင်သင်နေထိုင်သည်မဟုတ်ပါက Lottery.com မှပံ့ပိုးပေးသကဲ့သို့သင်၏ဆုကိုကိုယ်တိုင်စုဆောင်းရန်နယ်မြေသို့သွားရန်လိုအပ်ကြောင်းသင်အသိအမှတ်ပြုသည်။ Lottery.com သည်ခရီးသွားခြင်းနှင့်တည်းခိုခြင်းအပါအ ၀ င်သက်ဆိုင်သောခရီးသွားလာစရိတ်များကိုပေးရန်သဘောတူသည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ဆုကိုကောက်ယူရန်ခရီးသွားခဲ့လျှင်သင်ကသာတာ ၀ န်ယူမှုနှင့်တာ ၀ န်ခံမှုရှိမည်ဟုသင်သဘောတူသည်။ (၁) နိုင်ငံအတွင်း ၀ င်ရောက်ရန်လိုအပ်သောလိုအပ်သောနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဗီဇာနှင့်ခွင့်ပြုမိန့်အားလုံးကိုရရှိမည်။ (၂) လုံခြုံစိတ်ချရသောခရီးသွားအာမခံ (ဆေးကုသမှု၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိခိုက်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုများအတွက်သင့်အားအကာအကွယ်ပေးရမည်); (iii) လိုအပ်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ (၄) Lottery.com ၏အကူအညီဖြင့်သင်၏ဆုကိုမရယူမှီသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပုံစံများ၊ စာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်တင်သွင်းရန်လိုအပ်သောမည်သည့် Lottery Operating Rules ကိုမဆိုလိုက်နာရမည်။ ဤလိုအပ်ချက်များကိုမဖြည့်ဆည်းရန်သင်၏ပျက်ကွက်ခြင်းသည်သင်၏ဆုကိုရယူခြင်းမှတားဆီးနိုင်သည်ကိုသင်အသိအမှတ်ပြုသည်။ ခရီးသွားခြင်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်လုံးဝသက်ဆိုင်သည်ဟုသင်သဘောတူလက်ခံသည်။ Lottery.com အားသင်နှင့်ဆိုင်သောတရားဝင်သို့မဟုတ်သာတူညီမျှသောတောင်းဆိုမှုများ၊ အခွင့်အရေးများသို့မဟုတ်ကုစားမှုများကိုအောက်ပါအတိုင်းငြင်းပယ်သည် -
(က) ခရီးသွားခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအဖြစ်အပျက်များ၊ ဒဏ်ရာများ၊ နာမကျန်းမှုများ၊ နှင့်
(ခ) သင်၏ဆုကိုသင်စုဆောင်းနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းအပါအ ၀ င်အထက်ဖော်ပြပါလိုအပ်ချက်များကိုရယူရန်သို့မဟုတ်လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်း။
တနည်းအားဖြင့်သင်သည် Lottery.com ၏ရှေ့နေကိုသင့်ကိုယ်စားရယူရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကာကွယ်ပေးဖို့, ကုမ္ပဏီလက်မှတ်ဝယ်ယူမှုကန့်သတ်ထားအပါအဝင်သော်လည်းမဝယ်ယူမှုအပေါ်နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်ကန့်သတ်သတ်မှတ်ထားပေမည်။ နေ့စဉ်သုံးစွဲရောက်ရှိလျက်ရှိသည်ပြီးတာနဲ့မပိုအရောင်းအ 24 နာရီနောက်ဆုံးခြေစစ်ပွဲငွေပေးငွေယူပြီးနောက်သည်အထိအသုံးပြုသူရဲ့အကောင့်ပေါ်တွင်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
2.10 ။ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် & ထီန့်သတ်ချက်များ
အဆိုပါကုမ္ပဏီတစ်ခု concierge service တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်၎င်း၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့ကိုယ်စားပေါ်တွင်သင်၏အနိုင်ရရှိတဲ့စုဆောင်းဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအသိအမှတျပွုနှင့်ကုမ္ပဏီကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖန်ဆင်းတော်မူပြီလျှင်ထီအဖွဲ့အစည်းကနေစုဆောင်းမရနိုင်သည်ကိုမဆိုအနိုင်ရရှိတဲ့အတှကျအထိုက်ကျင်းပမည်မဟုတ်ပါကြောင်းသဘောတူသည်။
ထီလက်မှတ်တွေသာခွင့်ထီအေးဂျင့် / လက်လီအရောင်းဆိုင်များအားဖြင့်ရောင်းချခဲ့နိုင်ပါတယ်နှင့်ပြည်နယ်လိုင်းများကိုဖြတ်ပြီးရောင်းချခဲ့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ထီလက်မှတ်တွေကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့ Service ကိုပေးထားသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးချင်းစီကိုသက်ဆိုင်ရာစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိအခွင့်အာဏာထီအေးဂျင့် / လက်လီအရောင်းဆိုင်ထံမှ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်အားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်ဝယ်ယူနေကြသည်။ အဆိုပါအနိုင်ရရှိတဲ့အနိုင်ရထားရာအဆိုပါစီရင်ပိုင်ခွင့်အနိုင်ရ (s) ၏ဝိသေသလက္ခဏာပေးလိမ့်မည်။ ယင်းစီရင်ပိုင်ခွင့်ဟာထီဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အတူမည်သည့်ကိစ္စများကြောင့်စီရင်ပိုင်ခွင့်ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကထိန်းချုပ်ထားလိမ့်မည်။ သငျသညျထပ်မံအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အချို့တရားစီရင်မှု statutorily သင်စုဆောင်းနှင့် / သို့မဟုတ်သင့်အနိုင်ရရှိတဲ့သူတို့ကိုအကြောင်းကြားရပါမည်သည့်အတွင်းနှောင့်နှေးကန့်သတ်ကြောင်းသဘောတူသည်။ ဒါဟာသင်သည်မည်သည့်ဆုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါပြီရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်သင့်ရဲ့ဝယ်ယူမှု၏တစ်ဦးချင်းစီအားအတည်ပြုရန်သင့်တာဝန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျနောက်ထပ်သင်ကုမ္ပဏီသင်သည်အကြောင်းကြားရန်၎င်း၏အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုစေသမျှသောစကားတို့ကိုဆိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ဆုသည့်ပြဌာန်းချက်အချိန်ကန့်သတ်အတွင်းအရေးဆိုထားခြင်းမရှိပါ, သင်တို့တဘက်၌အဘယ်သူမျှမဥပဒေရေးရာပြန်လည်ကုရှိသည်လိမ့်မယ်, သောဖြစ်ရပ်အတွက်မည်ကိုသတိထားမိဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံနှင့်ကိုယ်စားပြု အဆိုပါကုမ္ပဏီနှင့် / သို့မဟုတ်ယင်း၏န်ထမ်းသို့မဟုတ်အေးဂျင့်မဆို, ကုမ္ပဏီဤဥပဒေသင်တစ်ဦးပြဌာန်းအချိန်ဘောင်အတွင်းမဆိုအနိုင်ရရှိတဲ့ဟုဆိုကာသင့်ရဲ့ဝယ်ယူမှုအတည်ပြုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်မ၏ရလဒ်အဖြစ်မဆိုအပေါင်းတို့နှင့်ဥပဒေရေးရာပြန်လည်ကုနှင့် / သို့မဟုတ်ကုစား၏ဖြန့်ချိသည်။
3.1 ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းသတင်းအချက်အလက်
အကောင့်တစ်ခုအတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်၊ play.lottery.com သို့ ဝင်ရောက်၍ သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးမြောက်ရန် Lottery.com အက်ပလီကေးရှင်းကို download လုပ်ပါ။ သင့်အနေဖြင့် (i) သင်၏ဖုန်းနံပါတ်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ သင်၏အီးမေးလိပ်စာ၊ သင်၏လူနေအိမ်လိပ်စာနှင့်သင်၏ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များအပါအဝင်သင်၏ပထမနှင့်နောက်ဆုံးအမည်နှင့်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတောင်းခံသည့်အတိုင်းတင်ပြရမည်။
သင်သဘောတူသည်မှာ (၁) ၀ န်ဆောင်မှု၏အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ပုံစံမှအချက်အလက်များမှန်ကန်ကြောင်း၊ တိကျမှန်ကန်မှု၊ လက်ရှိနှင့်ပြည့်စုံသောသတင်းအချက်အလက်များကို (“ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်”) ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် (၂) မှတ်ပုံတင်ခြင်းအချက်အလက်များကိုမှန်ကန်တိကျမှန်ကန်စွာထိန်းသိမ်းရန်၊ လက်ရှိနှင့်ပြည့်စုံ။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီသည်သင်၏အကောင့်အချက်အလက်များကိုအတည်ပြုရန်၊ အုပ်စုလိုက်သတင်းအချက်အလက်များကိုအသစ်ပြောင်းရန်သို့မဟုတ်သင်၏တောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်ကုမ္ပဏီသည်သင့်အားမေးလ်၊ အီးမေးလ်သို့မဟုတ်ဖုန်းမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်ကိုသင်သဘောတူသည်။ သင်၏အကောင့်ထဲသို့ ဝင်ရောက်၍ ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်၍ သင်၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထပ်မံအကူအညီအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ support@lottery.com ရှိဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်ပါ။ ကုမ္ပဏီမှကောက်ယူသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို၎င်း၏သီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီနှင့်လိုက်နာရမည် Lottery.com/privacy သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှု၏အချက်မှာပေးအပ်နှင့် "Just-in-အချိန်" သတိပေးချက်များရှိလျှင်။ ကျနော်တို့သုံးဆယ် (30) ရက်အတွင်းသင်မဆက်သွယ်နိုင်လျှင်သို့မဟုတ်သင်လက်ရှိသို့မဟုတ်မပြည့်စုံ, သစ္စာကိုဖျက်တိ, မဟုတျကွောငျးဆိုသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးစွမ်းဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်လက်ရှိသို့မဟုတ်မပြည့်စုံ, သစ္စာကိုဖျက်တိမဟုတ်ကြောင်းသံသယမှကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိပါတယ်လျှင်, ကုမ္ပဏီရပ်ဆိုင်းရန်သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ခြင်းသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုချက်ချင်း, သင့်အကောင့်ကိုချိန်ခွင်လျှာနှိမ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု (သို့မဟုတ် သိ. ဆိုသောအဘို့ကို) မဆိုအပေါင်းတို့နှင့်လက်ရှိသို့မဟုတ်အနာဂတ်အသုံးပြုမှုကိုငြင်းဆန်ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
3.2 ။ လျှို့ဝှက်တာဝန်
သင်၏ Identifiers များကိုလုံခြုံပြီးလျှို့ဝှက်ထားရန်သင်သဘောတူသည်။ သင်၏အကောင့်အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးအတွက်သင်၏တာ ၀ န်ယူမှုသည်သင်၏တာ ၀ န်သတ်မှတ်ချက်များကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမည်သူမဆိုအသုံးပြုခြင်း၊ သို့မဟုတ်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိပဲသို့မဟုတ်သင်၏အကောင့်သုံးစွဲနိုင်သောမည်သည့်စက်ပစ္စည်းကိုမဆို ၀ င်ရောက်ခြင်းအားလုံးအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ သင်၏အကောင့်သည်လုံခြုံပြီးလျှို့ဝှက်မှုမရှိတော့ဟုသင်စိုးရိမ်ပါက support@lottery.com သို့အီးမေးလ်ပို့။ ကုမ္ပဏီသို့ချက်ချင်းအကြောင်းကြားသင့်သည်။ ထိုအခါ Identifiers အသစ်များကို ရွေးချယ်၍ ခွဲဝေပြီးကုမ္ပဏီ၏တစ် ဦး တည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ယခင် Identifiers အောက်ရှိအနာဂတ်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါအချက်များကိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲသင်၏ Identifiers အသုံးပြုသော ၀ န်ဆောင်မှုအတွင်း (သို့) ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကုမ္ပဏီကိုသင်ယခင်ကအကြောင်းကြားခြင်းမရှိသေးသော) ၀ န်ဆောင်မှုအတွင်းတွင်ပြုလုပ်သောနှင့်လက်ခံသောမည်သည့်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုမဆိုတရားဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်မည်။
3.3 ။ တဦးတည်းအကောင့်
(1) အကောင့်ကိုလူတစ်ဦးနှုန်းခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဦးတည်းသာ။ ထိုအဖြစ်အပျက်အတွက်ကုမ္ပဏီသင်သည်တစ်ခုထက် ပို. (1) အကောင့်ကိုမှတ်ပုံတင်ထားကြပြီဆုံးဖြတ်သည်, သငျသညျအသိအမှတျပွုနှင့်ကုမ္ပဏီရှိစေခြင်းငှါအခြားမည်သည့်အခွင့်အရေးများအပြင်, ကုမ္ပဏီချက်ချင်းသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုရပ်ဆိုင်းသို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ခြင်းပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်, သဘောတူ, သင့်နှိမ် အကောင့်ဟန်ချက်မထီလက်မှတ်တွေသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာဆုရန်သင့်ညာဘက်ရုပ်သိမ်းရန်, နှင့်ဝန်ဆောင်မှု (သို့မဟုတ် သိ. ဆိုသောအဘို့ကို) မဆိုအပေါင်းတို့နှင့်လက်ရှိသို့မဟုတ်အနာဂတ်အသုံးပြုမှုကိုငြင်းဆန်။
3.4 ။ အဘယ်သူမျှမလွှဲပြောင်း
သင့်အကောင့်ကိုလွှဲပြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမအခြေအနေမျိုးမှာသင်ခွင့်ပြုပါသို့မဟုတ်စံချိန်စံညွှန်းများသို့မဟုတ်ဥပဒေများကိုချိုးဖောက်စေခြင်းငှါထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးစွဲဖို့, ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ဥပဒေနှစ်အောက်မဆိုလူတစ်ဦး, ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, အပါအဝင်အခြားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တတိယပါတီ, ခွင့်ပြုရကြလိမ့်မည် သငျသညျတည်ရှိသောနှင့် / သို့မဟုတ်နေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတည်ရှိသောနှင့် / သို့မဟုတ်နေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာနေကြဘယ်မှာမဆိုစီရင်ပိုင်ခွင့်၌တည်၏။ သင်က of Service ကိုမဆိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုရန်နှင့်သင့်အကောင့်နှင့် ဆက်စပ်. အခြားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တတိယပါတီအားဖြင့်သင့်ငွေပေးချေမှုတူရိယာမဆိုအသုံးပြုရန်အပြည့်အဝတာဝန်လက်ခံပါ။ ဤအပိုင်းကိုချိုးဖောက်ခဲ့ကြတွေ့ရှိမဆိုလူတစ်ဦးကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များထံသတင်းပို့စေခြင်းငှါနှင့်သူတို့၏အကောင့်အားလုံးကိုရန်ပုံငွေလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသင်သည်သင်၏အကောင့်ကိုအသုံးပြုပြီးအခြားသူတစ်ဦးဦး၏ရလဒ်အဖြစ်ခံရစေခြင်းငှါမဆိုအရှုံးများအတွက်ထိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
၀ န်ဆောင်မှုမှရပ်ဆိုင်းရန်နှင့်သင်၏အကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းရန် support@lottery.com သို့သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုအီးမေးလ်ပို့ရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်စာရင်းမသွင်းပါကသင်၏အကောင့်ကိုငွေဖြည့်တင်းပြီးအဆုံးသတ်လိမ့်မည်။
သင်နှင့်အတူချိတ်ဆက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်သင့်လျော်ကြောင်း (ပုဒ်မ 7.1 မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း) အားလုံးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲဝန်ဆောင်မှုချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သောအပါအဝင်, ဒါပေမယ့်မကန့်သတ်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်မိုဘိုင်း Device ကိုပေးရမညျ။ သင်ကန်ဆောင်မှုကိုရယူသုံးတဲ့အခါသင်ခံရကြောင်း, အပါအဝင်မည်သည့်အဖိုးအခအတွက်တာဝန်ရှိသည်သော်လည်း, အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်သို့မဟုတ်ဒေတာအသုံးပြုမှုစရိတ်, ကန့်သတ်ဘဲ, န့်အသတ်ခြင်းမရှိဘဲ, အပါအဝင် SMS ကို / MMS ကိုကိုစာသားပါသည်အခကြေးငွေ။
4.0 Lottery.com န်ဆောင်မှုများ
4.1 ။ ထီလက်မှတ်သဘောတူညီချက်
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်တစ် ဦး တည်းလက်မှတ်လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူအနေဖြင့်ပါ ၀ င်နေသည်။ သင်၏ကုမ္မဏီအားသင်၏ထီထရီကတ်လက်မှတ်များကို ၀ ယ်ယူသိုလှောင်ရန်၊ အနိုင်ရရှိရန်စုဆောင်းရန်နှင့်သင်၏အချိုးအစားဝေစုကိုသင်၏သုံးစွဲသူအကောင့်ထဲသို့ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ထည့်သွင်းရန်ကုမ္ပဏီအားသင်၏တာ ၀ န်ခံစေခိုင်းသူနှင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်သင်သဘောတူသည်။
သငျသညျထီဆု၏ငွေပေးချေမှုပြည်နယ်ဥပဒေနှင့်ထီစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီကြောင်းအသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ထီစည်းမျဉ်းများနှင့်တိုက်ရိုက်ငွေပေးချေခွင့်, ထို့နောက်ငွေပေးချေမှုများအတွက်အရေးဆိုချက်သည်သင်၏ကိုယ်စားကုမ္ပဏီအားဖြင့်လုပ်ရမည်ဖြစ်သောတစ်ဆုချီးမြှင့် (s) ကို၌ဤသဘောတူညီချက်ရလဒ်များ၏ဘာသာရပ်သောထီလက်မှတ်တွေသင့်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောစည်းမျဉ်းတစ်ဦးတည်းသာကိုသဘာဝလူတစ်ဦးမှဆု၏ငွေပေးချေမှုခွင့်အဘယ်မှာရှိ, ထို Company ၏ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအုပ်စုထဲမှာတစ်ဦးချင်းပါဝင်သူနှင့် / သို့မဟုတ်အားလုံးကို Co-ပိုင်ရှင်များ၏အကျိုးအတွက်ဆုကိုတောင်းဆိုစီသက်ဆိုင်ရာရန်သင့်လျော်သောအချိုးကျငွေပမာဏကိုဖြန့်ဝေစေခြင်းငှါ ပါဝင်သူရဲ့အကောင့်ကို။ အားလုံးတစ်ခါတလေငွေပေးချေမှုများအတွက်မည်သည့်ပြောဆိုချက်ကိုကုမ္ပဏီသင့်ကိုယ်စားပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စု၏ကိုယ်စားအပေါ်ကောက်ခံသောပြည်နယ်ထီ၏ကိုယ်စားလှယ်များအကြံပေးခွငျးအားဖွငျ့ကိုဖန်ဆင်းပါလိမ့်မည်။
4.3 ။ တစ်ဦးချင်းအသုံးပြုသူကျူးလွန်
တစ်ဦးလက်မှတ် (သို့မဟုတ်လက်မှတ်တွေ) ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးပြီးတာနဲ့သင်ကကျူးလွန်ထားတဲ့များအတွက်ပုံဆွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်သည်အထိ, သင်သည်သင်၏အကောင့်ရပ်ဆိုင်းလို့မရပါဘူး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တစ်ချိန်ကလက်မှတ် (သို့မဟုတ်လက်မှတ်တွေ) ကျူးလွန်ခဲ့ပြီး, သင်သည်သင်၏လက်မှတ် modify သို့မဟုတ်ဖယ်ရှား, လဲလှယ်မပြန်နိုင်။ တစ်ဦးဆွဲပြည်နယ်အားဖြင့်လွဲချော်သို့မဟုတ််ပြီးလျှင်, ကုမ္ပဏီလာမည့်ပုံဆွဲမရရှိနိုင်ပါရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်ဒီပြောင်းလဲမှုကိုမှကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်။
၄.၄ ။ ဂိမ်းရလဒ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်
လျှောက်လွှာ၏“ ရလဒ်” အပိုင်းသည်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရ jackpot နှင့် Powerball၊ Mega Millions နှင့်ပြည်တွင်းဂိမ်းရေးဆွဲမှုများအတွက်နောက်ဆုံးရရှိသောနံပါတ်များကိုဖော်ပြသည်။ ကုမ္ပဏီသည်ဤအချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်ရာဂိမ်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှရယူသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မည်သည့်တာဝန်ယူမှုကိုမဆိုငြင်းဆန်ပြီး၎င်းအချက်အလက်များ၏တိကျမှုသို့မဟုတ်ပြည့်စုံမှုအတွက်တာ ၀ န်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ ၀ ယ်ယူမှုတစ်ခုစီကိုအတည်ပြုရန်နှင့်မည်သည့်နိုင်မှုမျိုးမဆိုကုမ္ပဏီအားအကြံပေးရန်မှာသင်၏တာဝန်ဖြစ်သည်။
အနိုင်ရသည့်နံပါတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ Powerball နှင့် Mega Millions ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအနိုင်ရသောနံပါတ်များစာရင်းမှန်ကန်ကြောင်းသေချာစေရန်ကြိုးပမ်းသော်လည်းအားကစားဂိမ်းများအတွက်တရားဝင်အနိုင်ရသောနံပါတ်များကိုတရားဝင်မဲချခြင်းဖိုင်များတွင်သီးခြားလွတ်လပ်သောအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ စာရင်းကိုင်ကုမ္ပဏီ။ ထီဂိမ်းများအတွက်အနိုင်ရနံပါတ်များကိုတရားဝင်မဟုတ်ပါ၊ Carroll နှင့် Company, CPAs ၏စာရင်းစစ်ကုမ္ပဏီမှအတည်ပြုသည်။ Powerball ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။ powerball.com, Mega Millions ဝက်ဘ်ဆိုက်, https://www.megamillions.comသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်သင်၏ပြည်နယ်ထီက်ဘ်ဆိုက်။
အသုံးပြုသူများသည်အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်မှဘာသာရပ် "AutoPlay" စာရင်းသွင်းထားမှုများ, တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဤလျှောက်လွှာကိုအသုံးချရန်မှရွေးကောက်တင်မြှောက်မည်
AutoPlay subscriptions ကိုသာအခြို့သောထီများအတွက်ရရှိနိုင်ပေမည်။ AutoPlay စာရင်းပေးသွင်းမှုများအတွက်ရရှိနိုင်သောထီကြည့်ရှုရန်လျှောက်လွှာ Check;
တစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြုသူသာရရှိနိုင်ထီနှုန်းတဦးတည်း AutoPlay ကြေးပေးသွင်းအတွက်စာရင်းသွင်းစေနိုင်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီ AutoPlay စာရင်းသွင်းမှုအတွက်, အသုံးပြုသူတစ်ဦးချင်းစီဆွဲဘို့ကစားပါလိမ့်မည်ကြောင်းလက်မှတ်တွေတစ်အရေအတွက်ကရှေးခယျြရမညျဖွစျသညျ။ တချို့ထီ, သင်လည်းသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုချိန်ခွင်လျှာသုညဒေါ်လာ ($ 0) ရောက်ရှိသည့်အခါအလိုအလျောက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏမှသင့်အကောင့်လက်ကျန်ငွေကိုပြန်ဖွင့ဖို့ရှေးခယျြနိုငျသညျ။ တစ်ပြန်ဖွင့်တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်လျှင်သင့်အကောင့်ကိုအလိုအလျောက်လျှောက်လွှာ၏ 'AutoPlay' 'section မှာညွှန်ပြလက်မှတ်တွေများ၏အရေအတွက်ငွေကောက်ခံပါလိမ့်မည်;
တစ်ဦး AutoPlay ကြေးပေးသွင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်အမိန့်ထုတ်ခဲ့လက်မှတ်တွေအနိုင်ရဘို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသာမန်လက်မှတ်တွေ၏ထက်မကွဲပြားကြလိမ့်မည်။
5.0 ။ (သာ AutoPlay အသုံးပြုသူများသည်အတွက်) အလိုအလျောက်ထပ်တလဲလဲ Play စ & ငွေတောင်းခံလွှာသဘောတူညီချက်
5.1 ။ အခွင့်အာဏာပေးခြင်း
၀ န်ဆောင်မှုမှအလိုအလျောက်ကစားခြင်းအင်္ဂါရပ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်ပယ်များတွင်ကျွန်ုပ်သည်အရည်အချင်းပြည့်မီသည့်မဲနှိုက်ခြင်းအတွက်မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုစီအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုယ်စားလက်မှတ်များကိုအလိုအလျောက်ကစားရန်ကုမ္ပဏီအားခွင့်ပြုပါသည်။ အလိုအလျောက်ကစားမည့်လက်မှတ်အရေအတွက်သည် Lottery.com လျှောက်လွှာ၏ AutoPlay ကဏ္selectedတွင်ရွေးချယ်ထားသောလက်မှတ်အရေအတွက်ပေါ်အခြေခံလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုအပေါ် AutoPlay အင်္ဂါရပ်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်, ငါဤဥပဒေကုမ္ပဏီလျှောက်လွှာအပေါ်ကိုရှေးခယျြ '' ပြန်ဖွင့် '' လက်မှတ်တွေ၏နံပါတ်ပေါ်အခြေခံပြီး '' ပြန်ဖွင့် '' လက်မှတ်တွေငါ့အသုံးပြုသူအကောင့်အတွက်ဖိုင်ပေါ်တွင်ညွှန်ပြချက်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုအားသွင်းဖို့လုပ်ပိုင်ခွင့်။ ငါသည်ဤတာဝန်ခံကိုအလိုအလျောက်ငါ့အကောငျ့ကိုချိန်ခွင်လျှာ $0မှာဖြစ်ပါတယ်အခါတိုင်းဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်နားလည်ပါသည်။ ငါသည်လည်းငါ "0" ဖို့ Lottery.com လျှောက်လွှာထဲမှာပြန်ဖွင့် setting များကို setting များကမည်သည့်အချိန်တွင်မရာအရပျကိုယူပြီးမှဤထပ်တလဲလဲတာဝန်ခံကိုရပ်တန့်နိုင်သည်ကိုနားလည်ပါသည်။
5.2 ။ ငွေပေးချေမှုရမည့်ပျက်ကွက်
သင်၏ငွေပေးချေမှုကိုငြင်းဆန်ပါကလျှောက်လွှာတွင်သင်အကြောင်းကြားပြီးဖုန်းသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းသည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပျက်ကွက်ပါကသင်၏ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကန့်သတ်ထားနိုင်သည်။ မှတ်ချက် - အကယ်၍ သင်၏အလိုအလျောက်ငွေပေးချေမှုမရလျှင်၊ သင်၏အကောင့်ကိုအခြားငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြင့်ပြန်လည်ဖြည့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ငွေပေးချေမှုမပြုလုပ်ပါကကြိုတင်ပေးငွေမပါဘဲသင့်ကိုယ်စားလက်မှတ်ကိုဝယ်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင့်အားငြင်းဆန်သော ၀ ယ်ယူမှုအတွက်ငွေပေးချေမှုပျက်ကွက်မှုအတွက်သင့်အားအကဲဖြတ်နိုင်သည်
5.3 ။ ငွေပေးချေမှုရမည့်ပြောင်းခြင်း
သင်အပါအဝင်သင့်ရဲ့ငွေပေးချေကိုပြောင်းလဲလိုလျှင်ဥပမာ, စပိုင်းတွင်အခြားအကြွေးသို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ဘဏ်အကောင့်မရွေးခဲ့ကွောငျးတစျခုခရက်ဒစ်သို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်ကနေအပြောင်းအလဲကိုလုပ်, သင်ဝန်ဆောင်မှု၏ setting အပိုင်းအတွက်အကောင့်အရေအတွက်ကပြောင်းလဲပစ်ရမည်ဖြစ်သည်။
5.4 ။ လုံခြုံရေးအတည်ပြု
ကျွန်မအနေနဲ့လိပ်စာစိစစ်အတည်ပြုရှာဖွေရေးကို run ဖို့ကုမ္ပဏီနှင့်၎င်းတို့၏ပံ့ပိုးကူညီခြင်းကိုအေဂျင်စီပိုင်ခွင့်ပြုရန်။ ဤသည်စိစစ်အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုငါ့ခရက်ဒစ်ကဒ်ဆန့်ကျင်တရားမဝင်လိမ်လည်မှုကနေ, ငါ့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လုံခြုံရေးအတိုင်းအတာ, အဂလိုင်းတခုဖြစ်တယ်။ ငါအာမခံနှင့်ခိုင်လုံငါသည်ဤခရက်ဒစ်ကဒ်များအတွက်ဥပဒေရေးရာကတ်ကိုင်ဆောင်သူဖြစ်ကြောင်းကို၎င်း, ငါတရားဝင် Lottery.com နှင့်အတူဤငွေတောင်းခံသဘောတူညီချက်သို့ဝငျခှငျ့ပွုသူဖြစ်ကြောင်းကို။ ငါ Lottery.com, indemnify ကာကွယ်ရန်နှင့်ကျင်းပရန်သဘောတူသည်။ ဒီခွင့်ပြုချက်အညီမည်သည့်တာဝန်ယူမှုကိုဆန့်ကျင်, အန္တရာယ်ကင်း။ ဤသဘောတူညီလွှဲပြောင်းမဟုတ်ပါဘူးနှင့် Lottery.com အသုံးပြုသူအကောင့်အပေါ်အခွင့်အာဏာလူတစ်ဦးခြင်းဖြင့်သဘောတူညီခဲ့ရပါမည်။
6.0 ။ interactive အင်္ဂါရပ်များ
၀ န်ဆောင်မှုနှင့် တွဲဖက်၍ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သင်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှု၏အခြားအသုံးပြုသူများအပါအ ၀ င်သင်သို့မဟုတ်တတိယပါတီများအနေဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုအတွင်းအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) ကို ဆက်သွယ်၍ တင်နိုင်သည့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောလူမှုရေးလက္ခဏာများ (“ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များ”) များကိုပေးလိမ့်မည်။ သင်နှင့်အခြားအသုံးပြုသူများက ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ပါဝင်စေမည့်မည်သည့်အသုံးပြုသူပါဝင်သည်ကိုကုမ္ပဏီမှအတည်ပြု၊ အတည်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်ကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲသုံးစွဲသူပါဝင်မှု၏တိကျမှုသို့မဟုတ်တိကျမှုမရှိခြင်းအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်တွေ့ရသောအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ၏ပြည့်စုံမှု၊ တိကျမှု၊
သင်ကန်ဆောင်မှုရဲ့ Interactive မှအင်္ဂါရပ်များ၏သင့်အသုံးပြုရန်တစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ရှိသည်နှင့်အသင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာသူတို့ကိုသုံးပါ။
မည်သည့် Interactive မှအင်္ဂါရပ်များအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင် post transmit, ဖြန့်ဝေဖန်တီးသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်လုပ်ငန်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မှတစ်ဆင့်အောက်ပါမဆိုထုတ်ဝေဖို့မသဘောတူ:
ညစ်ညမ်းသော၊ ညစ်ညမ်းသော၊ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ၊ အရွယ်မရောက်သေးသူများ၊ ညစ်ညမ်းသော၊ မသန်မစွမ်းသူ၊ မတရားပြုမှု၊ အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ နှောက်ယှက်ခြင်းခံရသောမက်ဆေ့ခ်ျများ၊ မှတ်ချက်များ၊ အချက်အလက်များ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသီးသန့်တည်ရှိမှုသို့မဟုတ်လူသိရှင်ကြားအခွင့်အရေးများကိုခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်း၊ ထိုးဖောက်ခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းရမ်းကားခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ မုန်းတီးမှု၊ လိမ်လည်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားကန့်ကွက်ခြင်း (ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ကုမ္ပဏီမှဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်း)၊
အားပေးသို့မဟုတ်ပေးမယ့်ရာဇဝတ်မှုပြစ်မှုအတွက်ညွှန်ကြားချက်, မည်သည့်ပါတီများ၏အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်တာဝန်ယူမှုကိုဖန်တီးသို့မဟုတ်မည်သည့်ဒေသခံ, ပြည်နယ်အမျိုးသားရေးသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်မယ်လို့မယ်လို့အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ;
သငျသညျ post သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်မဆိုဥပဒေအရသို့မဟုတ် (ထိုကဲ့သို့သောအတွင်းသတင်းအချက်အလက်, စီးပွားဖြစ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်အလုပ်အကိုင်ဆက်ဆံရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်သို့မဟုတ် nondisclosure သဘောတူညီချက်များအောက်မှာလေ့လာသင်ယူသို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်ကဲ့သို့) စာချုပ်သို့မဟုတ်ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်ဆက်ဆံရေးအောက်မှာထုတ်လွှင့်ဖို့ခွင့်ရှိသည်မအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ;
မည်သည့်မူပိုင်ခွင့်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်, မူပိုင်ခွင့်, လူသိရှင်ကြားသို့မဟုတ်အခြားဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု, အကြောင်းအရာ, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်ပါတီများ၏စီးပွားဖြစ်ညာဘက်၏ညာဘက်ချိုးဖောက်သို့မဟုတ်ချိုးဖောက်စေခြင်းငှါအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ။ အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာပို့စ်တင်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ကိုယ်စားပြုနှငျ့သငျ, ထုတ်လွှင့်ဖြန့်ဝေ, မျိုးပွားခြင်း, ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာကိုဖေါ်ပြဖို့အေပျခွင့်ရှိသည်အကြောင်းခိုင်လုံ;
အခြားရဲ့အရည်အချင်း, ဥပဒေဆိုင်ရာသတိပေးချက်များသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်ပုံစံ falsifies သို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ;
အသုံးပြုသူမဆိုလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်း (ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်အနုပညာရှင်၏, န့်အသတ်မရှိ, ညွှန်ကြားရေးမှူး, အရာရှိ, ဝန်ထမ်း, ရှယ်ယာရှင်, အေးဂျင့်သို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်) သို့မဟုတ်မဟုတ်မမှန်ပြည်နယ်များအယောင်ဆောင်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ကုမ္ပဏီနှင့်သင်၏ဆက်နွယ်မှုဂေါ်သောအကြောင်းအရာများ, သို့မဟုတ်အခြားလူတစ်ဦးသို့မဟုတ် entity;
မလိုလားသောသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကြော်ငြာ, မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးသို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများ, junk mail ကို, spam, ကွင်းဆက်အက္ခရာများ, ပိရမစ်အစီအစဉ်များသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်တောင်းနိုင်အောင်နဲ့ spyware တွေရဲ့မြှင့်တင်ရန်ဆိုပစ္စည်းများ, malware နဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ပစ္စည်းများကို၏အခြားပုံစံများ;
ကန့်သတ်ချက်မဲ့ဖုန်းနံပါတ်များ၊ စာတိုက်လိပ်စာများ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာများ၊ လူမှုဖူလုံရေးသတင်းအချက်အလက်များ၊
အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ "နောက်ယောင်ခံ" သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်လုပျငနျးသို့မဟုတျကုမ်ပဏီတစ်ခုဝန်ထမ်း၏အခြားအသုံးပြုသူနှောင့်ယှက်။ ဤသည်တို့ပါဝင်သည်နိုငျသျောလညျးထိုကဲ့သို့အကြိမ်ကြိမ်မလိုချင်တဲ့မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းသို့မဟုတ်အပြေးပြိုင်ပွဲ, လိင်, ဘာသာရေး, အမွေအနှစ်များ, စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများသို့မဟုတ်ထုတ်ပြန်ချက်များအောင်သကဲ့သို့, နှောင့်ယှက်ခြိမ်းခြောက်, ရှက်စရာ, ဒါမှမဟုတ်မလိုချင်တဲ့ကြောင်းအရာအားလုံးထက်လုပ်နေတာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ် .;
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုချိတ်ဆက်ဆာဗာများသို့မဟုတ်ကွန်ရက်များ disrupts သို့မဟုတ်စုဆောင်းသို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်စုဆောင်းဖို့ကြိုးစားမှုသို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်စကားဝှက်အသုံးပြုသူအကောင့်အချက်အလက်တွေကိုဒါမှမဟုတ် of Service ကိုအသုံးပြုသူများသည်အကြောင်းကိုအခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာကြောင့်အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ;
ဆော့ဖျဝဲဗိုင်းရပ်စ်များ, ပကျြစီးဒေတာ, သို့မဟုတ်အခြားအန္တရာယ်ရှိသော, နှောင့်အယှက်သို့မဟုတ်အဖျက်ဆော့ဖ်ဝဲ, ကွန်ပျူတာကုဒ်, ဖိုင်များသို့မဟုတ်အစီအစဉ်များ; နှင့်
၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိအတွက်ကုမ္ပဏီကဆုံးဖြတ်အဖြစ်ကန့်ကွက်စရာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် of Service ကို Interactive မှအင်္ဂါရပ်များကို အသုံးပြု. သို့မဟုတ်ခံစားထံမှမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကန့်သတ်သို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်သောဆိုးရွားစွာအခြားသူများအား၎င်းတို့၏အရင်းအမြစ်များရရှိမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုကြောင့်အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ (အားလုံးမြို့တော်၏ဥပမာကိုအသုံးပြုခြင်း စာလုံးများသို့မဟုတ်ထပ်တလဲလဲစာသားစဉ်ဆက်မပြတ်ပို့စ်), သို့မဟုတ်မည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုထိခိုက်မှုသို့မဟုတ်တာဝန်ယူမှုဖို့ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ယင်း၏အသုံးပြုသူများကိုဖော်ထုတ်စေနိုင်သည်။
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာဘို့တစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ရှိသည်နှင့်အသငျသညျ post အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာများအတွက်ထိုက်ကျင်းပနိုင်ပါသည်။ ပညတ်တရားအားဖြင့်ခွင့်ပြုအများဆုံးအတိုင်းအတာရန်, ကုမ္ပဏီဖယ်ရှားခြင်းအတွက်မည်သည့်အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာသင်အားဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်မည်သည့်တတိယပါတီမှသိမ်းဆည်းထားသည့်သို့မဟုတ်အပ်လုဒ်တင်ပြီး, posted, ရမညျဆိုအရှုံးသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုပျက်ကွက်မှုအတွက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်နှောင့်နှေးမတာဝန်သို့မဟုတ်တာဝန်ယူမှုယူဆ ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ, မသင်ကြုံတွေ့ရစေခြင်းငှါမဆိုအမှားများကို, အသရေဖျက်မှု, ကဲ့ရဲ့ခြင်း, သရေဖျက်မှု, ပျက်ကွက်, မုသာ, ညစ်ညမ်းမှု, ညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်အယုတ္တအနတ္တအဘို့အထိုက်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီမဆို Interactive မှအင်္ဂါရပ်များမှတစ်ဆင့် posted ကိုမဆိုအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာရဲ့ contents အဘို့အဘယ်သူမျှမတာဝန်ရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း, သင်ကုမ္ပဏီသုံးစွဲဖို့အတွက်, တားမြစ်ခြင်းမရှိသောခြွင်းချက်မရှိ, န့်အသတ်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း, ဘယ်သို့, မူပိုင်-အခမဲ့, Non-သီးသန့်, ဘယ်သို့ညာနဲ့လိုင်စင်ပေးရန်သဘောတူ , ပြပွဲ, ထုတ်လွှင့်, မိတ္တူ, မျိုးပွား, ထုတ်ဝေ, ဖြန့်ဝေ, အန်ကုက်လုပ်ပါ, ချုံ့, စာဝှက်, ပြင်ဆင်ရန်ထဲသို့ဒေတာကိုထည့်သွင်း, rebroadcast, transmit, စံချိန်, လူသိရှင်ကြားရှိသမျှတို့, လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဖန်တီးလက်ရာများထံမှသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်သမျှတစုံတမျိုးအတွက်အမြတ်ထုတ်လူသိရှင်ကြား, ဖော်ပြရန် သို့မဟုတ်သင်လှူဒါန်းခဲ့သောရန်သင့်အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာမဆိုဆက်ဆံမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်, လောကီသားတစ်လျှောက်လုံးမည်သည့်အပေါင်းတို့နှင့်မီဒီယာ, ယခုလူသိများသို့မဟုတ်နောင်ကြံစည်အတွက်အစဉ်ပိုင်နှင့်သင်မှမဆိုလျော်ကြေးငွေမရှိဘဲ။ သငျသညျမဆိုအခြားပါတီ posted ကိုမဆိုအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ delete သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ဖို့မသဘောတူသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီပိုင်ခွင့်ရှိသည်နှင့်, မျက်နှာပြင်ကိုဖယ်ရှားသို့မဟုတ်အသိပေးစာမပါဘဲမည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုအတွင်း posted သို့မဟုတ်သိုလှောင်ထားသောမည်သည့်အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာတည်းဖြတ်ရန်အကြွင်းမဲ့အာဏာသမ္မာသတိ, ရှိပါတယ်။ မဆိုအထက်ပါချိုးဖောက်အတွက် Interactive မှအင်္ဂါရပ်များ, သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု၏အခြားဝေမျှ၏အသုံးပြုမှုကိုအသုံးပြုခြင်းဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ပေါ်စေမည်, သင့်အကောင့်ကိုတခြားအမှုအရာတို့တွင်ရပ်စဲသို့မဟုတ်ရပ်ဆိုင်းမှုသို့မဟုတ်သင့်အခွင့်အရေးများအတွက် Interactive မှထူးခြားချက်များကိုအသုံးပြုရန်နှင့် / သို့မဟုတ် အဆိုပါဝန်ဆောင်မှု။ သငျသညျအသိအမှတျပွုနှင့်ကုမ္ပဏီန့်အသတ်ခြင်းမရှိဘဲ, အပါအဝင်သင်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကသင်၏အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်, access ကိုအသုံးပြုဖို့သို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်ခြင်းအလိုငှါသဘောတူ, မည်သည့်အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ, ကုမ္ပဏီရဲ့အခွင့်အရေး, ပညတ္တိကျမ်းသို့မဟုတ်မည်သည့်ဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ခုခံကာကွယ်ဖို့သို့မဟုတ် ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ယင်း၏န်ထမ်းများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, ဖောက်သည်များသို့မဟုတ်အများပြည်သူကာကွယ်ပေးဖို့။
၀ န်ဆောင်မှုအတွင်းသင်တင်လိုက်သောမည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုအများပြည်သူဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်လာသည်၊ အခြားသူများကစုဆောင်း။ သုံးနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ တတိယပါတီများထံမှမလိုလားသောမက်ဆေ့ခ်ျများကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီသည်သင်၏လိပ်စာများသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်များကဲ့သို့သောသင့်အားဖော်ထုတ်ရန်သို့မဟုတ်နေရာချထားရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သောမည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမတင်ရန်သင့်အားတားဆီးသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များမည်သည့်နေရာတွင်မဆို POST ပြုလုပ်ရန်သင်ရွေးချယ်ပါကသင့်ကိုယ်ပိုင်စွန့်စားမှုကိုပြုလုပ်ပါ။
အဆိုပါ Lottery.com App ကိုမှ 7.0 လီမိတက်လိုင်စင်
7.1 ။ လိုင်စင် Grant က
ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာပါကကုမ္ပဏီအနေဖြင့် (i) ကုမ္ပဏီ၏မိုဘိုင်းလျှောက်လွှာ (“ Lottery.com App”) ကိုသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက်မဟုတ်ပါကကန့်သတ်ထားသည့်၊ - သင်ပိုင်ဆိုင်သောသို့မဟုတ်အခြားထိန်းချုပ်မှုရှိသည့်လက်ကိုင်ဖုန်းတွင် (စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်း) ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ (၂) Lottery.com App မှတဆင့်ရရှိနိုင်သည့်သို့မဟုတ်အခြားလက်လှမ်းမီသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရယူသုံးစွဲခြင်း။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အသုံးပြုမှုအခြေအနေများနှင့်အညီတင်းကြပ်စွာ။
7.2 ။ လိုင်စင်ကန့်သတ်
အဖြစ်ဖော်ပြဒီလိုင်စင်ကခွင့်ပြုသော မှလွဲ. ပု Lottery.com App ကို copy;
အဆိုပါ Lottery.com App ကို၏, မူပိုင်ခွင့်ရှိမရှိသို့မဟုတ်မ, ပြုပြင်ခြင်းဘာသာပြန်ဆို, လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်လက်ရာများသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုဖန်တီး;
ပြောင်းပြန်အင်ဂျင်နီယာ, disassemble, decompile, ကုဒ်ဖြုတ်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်အဆိုပါ Lottery.com App ကိုသို့မဟုတ်တို့ကိုမဆိုစိတျအပိုငျးမြား၏ source code ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရယူထားခြင်းသို့မဟုတ်ရဖို့ကြိုးစား;
၎င်းဆိုမိတ္တူအပါအဝင် Lottery.com App ကိုထံမှအခွင့်အရေးများသတိပေးချက်များ Remove, ဖျက်ခြင်းပြောင်းလဲသို့မဟုတ်ဖုံးကွယ်မဆိုအမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်မည်သည့်မူပိုင်ခွင့်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, မူပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်အခြားဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်;
အဆိုပါအောင်အပါအဝင်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်တစ်စုံတစ်ရာတတိယပါတီမှငှား, ငှားရမ်းခြင်း, ချေးငှား, ရောင်းချ, sublicense, assign, ဖြန့်ဝေ, ထုတ်ဝေ, လွှဲပြောင်းသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်အဆိုပါ Lottery.com App ကိုဒါမှမဟုတ် Lottery.com App ကိုမဆို features တွေသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမရရှိနိုင်ပါစေ, ဒါကြောင့်ဘယ်အချိန်မဆိုမှာတစ်ခုထက် ပို. မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများကဝင်ရောက်ခံရနိုင်စွမ်းတဲ့ network ပေါ်မှာ Lottery.com App ကိုရရှိနိုင်;
Remove, disable, ကျော်လွှားသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်မဆိုမိတ္တူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမှမဆိုပြသနာကိုကျော်လွှားနိုင်စေရန်ဖန်တီးသို့မဟုတ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်, အခွင့်အရေးများစီမံခန့်ခွဲမှုသို့မဟုတ်လုံခြုံရေး features အတွက်ဒါမှမဟုတ် Lottery.com App ကိုကာကွယ်; သို့မဟုတ်
ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောလောင်းကစားဝိုင်းမဆိုပုံစံတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုအတွက်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, အပါအဝင်တည်ဆဲဥပဒေများသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းများအားဖြင့်တားမြစ်ထားသောတစ်ထုံးစံအတွက် Lottery.com App ကိုအသုံးပြုပါ။
အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များချိုးဖောက်ခြင်းအတွက် Lottery.com App ကိုအသုံးပြုပါ။
မဆိုဤကဲ့သို့သောအကငျြ့သင်၏အကောင့်၏ချက်ချင်းရပ်စဲအဖြစ် Lottery.com App ကိုရန်သင့်ကန့်သတ်ပိုင်ခွင့်နှင့်လိုင်စင်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများအဘို့အတာဝန်ယူမှုရန်သင့်အားလက်အောက်ခံဖြစ်နိုင်သည်။
7.3 ။ အခွင့်အရေး reservation
သငျသညျထပ်မံအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် Lottery.com App ကိုလိုင်စင်အောက်မှာပေး, သင်ဖို့, ကိုရောင်းမပေးကြောင်းသဘောတူသည်။ သငျသညျကိုအသုံးပြုခြင်းဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအောက်ရှိ Lottery.com App ကိုအတွက်မဆိုပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးစီးပွားဆည်းပူး, ဒါမှမဟုတ်လိုင်စင်ခွင့်ပြုအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အသုံးအနှုန်းများမှဘာသာရပ်နှင့်အညီအတွက် Lottery.com App ကိုသုံးစွဲဖို့ထက်အခြားရမညျကိုအခြားအခွင့်အရေး, အခြေအနေများနှင့်ကြဘူး အသုံးပြုမှုဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအောက်တွင်ကန့်သတ်။ အဖြစ်ဖော်ပြ၌သင်တို့ကိုမှခွင့်ပြုခဲ့ မှလွဲ. အဆိုပါကုမ္ပဏီနှင့်၎င်း၏လိုင်စင်ရနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးအရံနှင့် Lottery.com App ကိုနှင့်၎င်းတို့၏တစ်ခုလုံးကိုပိုင်ခွင့်, ခေါင်းစဉ်နှင့်အကျိုးစီးပွားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်လိမ့်မည်မြို့သားအားလုံးမူပိုင်ခွင့်, အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အခြားဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများအပါအဝင်သို့မဟုတ်ရမညျသက်ဆိုင်သော, ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သုံးစွဲမှုအခြေအနေ။
7.4 ။ အပ်ဒိတ်များ
အချိန်နှင့်အမျှကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် Lottery.com အက်ပလီကေးရှင်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ချို့ယွင်းချက်ပြင်ဆင်ခြင်းများ၊ ပြင်ဆင်မှုများနှင့်အခြားအမှားပြင်ဆင်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များ (ဆက်စပ်စာရွက်စာတမ်းများ၊ “ မွမ်းမံမှုများ”) တို့ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ။ မွမ်းမံမှုများသည်အချို့သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများကို၎င်းတို့၏တစ်ခုလုံးကိုပြုပြင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မည်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုမဆိုနောက်ဆုံးသတင်းများတင်ရန် (သို့) မည်သည့်အထူးအင်္ဂါရပ်များ (သို့) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးရန်တာဝန်ရှိသည်ဟုသင်သဘောတူသည်။ သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာ၏ဆက်တင်များအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏မိုဘိုင်းစက်ကိုအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါ (i) Lottery.com App သည်ရရှိနိုင်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများအားလုံးကိုအလိုအလျောက်ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်လိမ့်မည်။ (၂) သင်အသိပေးစာရရှိမည်သို့မဟုတ်ရရှိနိုင်ပါကဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ရန်သတိပေးခံရလိမ့်မည်။ မွမ်းမံမှုများ။
သငျသညျအသိအမှတျပွုနှငျ့သငျချက်ချင်းအားလုံးအပ်ဒိတ်များ download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့ပျက်ကွက်သင့် Lottery.com App ကိုသို့မဟုတ်ဝေမျှတို့ကိုစနစ်တကျ operate မပြုစေခြင်းငှါသဘောတူသည်။ သငျသညျထပ်မံအားလုံးအပ်ဒိတ်များဟာ Lottery.com App ကို၏တစိတ်တပိုင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်းသဘောတူနှင့်သုံးစွဲမှုသည်ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များမှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
7.5 ။ မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုစွပ်စွဲချက်
အဆိုပါ Lottery.com App ကိုအချို့ features တွေသင့်ရဲ့ service provider ကယ့်ဒေတာသို့မဟုတ်မိနစ်စရိတ်ကန့်သတ်လောင်ခြင်းနှင့်ကျော်လွန်စေခြင်းငှါအရာ, န့်အသတ်ခြင်းမရှိဘဲ, Lottery.com App ကိုဒေါင်းလုပ်ရယူအပ်ဒိတ်များအပါအဝင်ကုမ္ပဏီ၏ဆာဗာ, အတူဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်သည်။ သငျသညျအသိအမှတျပွုနှင့်သင်သည်သင်၏ဝန်ဆောင်မှုပေးနေဖြင့်ချမှတ်ထားသည့်ကန့်သတ်ကျော်လွန်ဘို့အကဲဖြတ်မဆို overage နှင့်ပြစ်ဒဏ်များအပါအဝင် Lottery.com App ကို၏ရလဒ်အဖြစ်သင့်ရဲ့ဒေတာတွေကို / မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အတူမြှုတ်ဆိုစွဲချက်အဘို့တစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ယူဖြစ်ကြောင်းသဘောတူသည်။
သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာ၏ကုန်ကျစရိတ်အတွက်သင်၏တာ ၀ န်ရှိသည်။ သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာသည် Lottery.com အက်ပလီကေးရှင်း၏စနစ်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်သေချာသည်။ ၎င်းသည် Lottery.com အက်ပလီကေးရှင်းကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန်သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူထံမှကာလအပိုင်းအခြားအလိုက်မွမ်းမံမှုများသို့မဟုတ်အဆင့်မြှင့်မှုများအပါအဝင်။ LOTTERY.COM APP သည်မည်သည့်အသေးစိတ်မိုဘိုင်းစက်ကိရိယာနှင့်မဆိုကိုက်ညီသောသို့မဟုတ်လည်ပတ်နိုင်သည့်မည်သည့်ကုမ္ပဏီမှအာမခံသို့မဟုတ်မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုလက်ခံသောမည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုမည်သည့်ကုမ္ပဏီမှအာမခံသို့မဟုတ်အာမခံချက်မရှိပါ။
7.6 ။ အသုံးအနှုန်းနှင့်ရပ်စဲခြင်း
အဆိုပါ Lottery.com App ကိုရန်သင့်ကန့်သတ်လိုင်စင်သက်တမ်းကိုသင် Lottery.com App ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးအသုံးပြုမှုဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုလက်ခံတဲ့အခါမှာစတင်နှင့် (ဈ) ၏အစောပိုင်းသည်အထိအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ဆက်လက်မည် Lottery.com App ကိုသင့်ရဲ့ deletion 'ကနေ သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်သင့်ကန့်သတ်သည့် Lottery.com App ကိုမှလိုင်စင်နှင့် / သို့မဟုတ်သင့်အကောင့်၏ရပ်စဲ၏ (ii) ကုမ္ပဏီ၏ရပ်စဲ။ ရပ်စဲအပေါ်သို့ (ဈ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအောက်တွင်သင်တို့ဆီသို့ခွင့်ပြုခဲ့သမျှသောအခွင့်အရေးများလည်းရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်ပြီး (ii) သင်တို့ရှိသမျှကိုအသုံးပြုခြင်းငြိမ်းနှင့်သင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများမှ Lottery.com App ကိုအပေါငျးတို့သကော်ပီကိုဖျက်ပစ်ရပေမည်။ သင့်ရဲ့ကန့်သတ်လိုင်စင်ရပ်စဲတရားသို့မဟုတ်ရှယ်ယာအတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့အခွင့်အရေးများသို့မဟုတ်ကုစားမဆိုကန့်သတ်မည်မဟုတ်။
8.1 ။ မူပိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့် Non-Commercial အသုံးပြုမှုဆိုက်
ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စာသား၊ ပြသမှု၊ ဂရပ်ဖစ်၊ ဗွီဒီယို၊ အသံနှင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲအပါအ ၀ င်ပါဝင်သည့်အရာများ၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများ၊ ), ကုမ္ပဏီ, ၎င်း၏လိုင်စင်ရသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကို၏အခြားပံ့ပိုးပေးကပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်, အမှတ်တံဆိပ်, မူပိုင်ခွင့်, ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်နှင့်အခြားဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်အခွင့်အရေးဥပဒေများကကာကွယ်ထားသည်။
အသုံးပြုမှုဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသာသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး non-စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်းများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်သင်ကခွင့်ပြုသည်။ သငျသညျလူသိရှင်ကြား, ဖော်ပြရန်လူသိရှင်ကြားလုပ်ဆောင်ပြန်လည်, download, အစတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်အောက်ပါအတိုင်း မှလွဲ. လုပျငနျးအပျေါအကြောင်းအရာမဆိုထုတ်လွှင့်, မျိုးပွားဖြန့်ဝေ, ပြုပြင်ခြင်း၏လက်ရာများကိုမဖန်တီးရပါမည်:
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုယာယီသင့်ရဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ဖွစျပှား RAM ကိုထိုသို့သောအကြောင်းအရာ၏မိတ္တူကိုသိုလှောင်နှင့်ထိုပစ္စည်းများကြည့်ရှုနိုငျသညျ။
သငျသညျအလိုအလြောကျ display ကိုတိုးမြှင့်ရည်ရွယ်ချက်အဘို့သင့်ကို Web browser များက cached ဖြစ်ကြောင်းဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းထားစေနိုင်သည်။
ကျနော်တို့အခြို့သောအကြောင်းအရာနှင့်အတူလူမှုရေးမီဒီယာ features တွေပေးလျှင်သင်သည်ထိုကဲ့သို့သော features တွေအားဖြင့် enabled နေကြသည်ကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များယူပါစေ။
သငျသညျ, မိတ္တူ print ထုတ်လျှင်, ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုရန်သင်၏လက်ျာဘက်ချက်ချင်းငြိမ်းလိမ့်မည်နှငျ့သငျရပါမည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာ download လုပ်ပါသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်အသုံးပြုမှုများ၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ဖောက်ဖျက်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုမဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူအခြားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုသုံးပါသို့မဟုတ်များကိုပေးစွမ်း modify option ကို, သင်ဖန်ဆင်းထားသောအကြောင်းအရာမဆိုမိတ္တူပြန်လာသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးနှင့်။ ကုမ္ပဏီ, လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်မည်သည့်အကြောင်းအရာအတွက်သို့မဟုတ်အခွင့်မရှိသော, ခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားသင်တို့ဆီသို့ပြောင်းရွှေ့နေသည်နှင့်ဖော်ပြခွင့်ပြုမပြုအားလုံးအခွင့်အရေးများကုမ္ပဏီများက reserved နေကြသည်။ ဖော်ပြသုံးစွဲမှုသည်ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကခွင့်ပြုသောမ of Service ကိုမဆိုသုံးစွဲခြင်းအသုံးပြုခြင်းဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ပြိုပျက်ရာသည်နှင့်မူပိုင်ခွင့်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အခြားဥပဒေများချိုးဖောက်စေနိုင်သည်။
8.2 ။ အမှတ်တံဆိပ်
အဆိုပါကုမ္ပဏီအမည်, ကုမ္ပဏီလိုဂိုအပေါင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သောအမည်များ, အမှတ်တံဆိပ်များ, ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုအမည်များ, ဒီဇိုင်းများနှင့်ကြွေးကြော်သံများကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ယင်း၏ affiliates သို့မဟုတ်လိုင်စင်ခွင့်ပြု၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။ သင်ကကုမ္ပဏီ၏ကြိုတင်ရေးထားလျက်ရှိ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲထိုကဲ့သို့သောအမှတ်အသားများကိုအသုံးမပြုရပါ။ ရှိသမျှသည်အခြားသောနာမည်များ, အမှတ်တံဆိပ်များ, ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုအမည်များ, ဒီဇိုင်းများနှင့်ကြွေးကြော်သံများဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။
8.3 ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထောင်စုနှစ်မူပိုင်အက်ဥပဒေအောက်တွင်တောင်းဆိုချက်များပြုလုပ်ခြင်းများအတွက်အသိပေးချက်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
ဒီဂျစ်တယ်ထောင်စုနှစ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ (“ DMCA”) သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေအရ၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးများကိုအင်တာနက်ပေါ်မှတတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်ချိုးဖောက်သည်ဟုယုံကြည်သောမူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်များကိုပြန်လည်အသုံးပြုသည်။ လူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမူပိုင်ခွင့်မူပိုင်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိပဲကူးယူပြီး ၀ န်ဆောင်မှုအတွင်းတွင်မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ပါကတစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီ၏သတ်မှတ်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ထံ၎င်းတို့၏တောင်းဆိုချက်ကိုအသိပေးနိုင်သည်။ အသိပေးစာထိရောက်စေရန်အတွက်၎င်းတွင်အောက်ပါအချက်အလက်များပါဝင်ရမည် -
တိုင်ကြားသူအားဆက်သွယ်ရန်ကုမ္ပဏီအားခွင့်ပြုရန်လုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်၊ ဥပမာလိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်နှင့် အကယ်၍ ရှိလျှင်တိုင်ကြားသူနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်အီးမေးလ်လိပ်စာ။
လူတစ်ဦးအငြင်းပွားအသုံးပြုမှုကိုမူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်က၎င်း၏အေးဂျင့်, ဒါမှမဟုတ်ပညတ်တရားအားဖြင့်အခွင့်အာဏာမဟုတ်ကြောင်းအကောင်းတစ်ဦးယုံကြည်မှုရှိကြောင်းတစ်ဦးကကြေညာချက်; နှင့်
အဆိုပါကုမ္ပဏီရဲ့ designated အေးဂျင့်တစ်ဦးချင်းကသူတို့အလုပ်ကိုမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောချိုးဖောက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်ပါဝငျသောလမ်းများတွင်အသုံးပြုသို့မဟုတ်ကူးယူထားပြီးယုံကြည်သည်သာလြှငျဆက်သွယ်မေးမြန်းရာရပါမည်။ သတ်မှတ်ထားသောအေးဂျင့်မှအားလုံးသည်အခြားစစ်ကြောင်းဖြေကြားပေးမည်မဟုတ်ပါ။
9.1 ။ အသုံးပြုမှုများ၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များမှအပြောင်းအလဲများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အသုံးပြုမှုအခြေအနေများကိုအချိန်မရွေးသင့်အားကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိပဲပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍ ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုပြုပြင်မွမ်းမံပါကကျွန်ုပ်တို့သည်“ နောက်ဆုံးပြုပြင်မွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ” ကိုမွမ်းမံပြီးပို့စ်တင်ပြီးနောက်ဤပြောင်းလဲမှုများသည်ထိရောက်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲခြင်းဟုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်သည်ဆိုပါကအသိပေးချက်တစ်ခုတင်ခြင်းအားဖြင့်သို့မဟုတ်ဖိုင်ရှိအီးမေးလ်လိပ်စာများသို့အသိပေးခြင်းဖြင့်သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ support@lottery.com.com သို့ကျွန်ုပ်တို့အားချက်ချင်းအကြောင်းကြားစာပေးပို့ခြင်းဖြင့်သင်၏အီးမေးလိပ်စာပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အကြောင်းကြားမှုမဆိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးရန်သင့်တာဝန်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းအပြောင်းအလဲများနောက်မှသင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန်သည်သင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအတည်ပြုရန်သဘောတူရန်လိုအပ်သည်။ သင်အပြောင်းအလဲများကိုသဘောမတူပါကသင်၏တစ်ခုတည်းသောကုစားနည်းသည် Service ကိုအသုံးပြုခြင်းအားရပ်ဆိုင်းရန်နှင့် support@lottery.com.com သို့စာဖြင့်အကြောင်းကြားစာပေးပို့ရန်ဖြစ်သည်။ သင်မှသင်ကိုညွှန်ကြားခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အကောင့်ကိုအလိုအလျောက် ဖျက်၍ သင်၏အကောင့်ထဲရှိကျန်ရှိသောရန်ပုံငွေများကိုပြန်ပို့ပါမည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင် ၀ င်ရောက်တိုင်းဤစာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
9.2 ။ အာမခံ၏ခွင
ဝန်ဆောင်မှု၎င်း၏အကြောင်းအရာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့်ရရှိသောမညျသညျ့အရာသင့်အသုံးပြုမှုသင်၏ကိုယ်ပိုင်တာဝန်ယူမှု IS ။ ဝန်ဆောင်မှု၎င်း၏အကြောင်းအရာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုရယူသည့်အရာများ, တစုံတမျိုးမဆိုအာမခံမရှိ, "ကဲ့သို့ရရှိနိုင်သော" အခြေခံ "IS AS" AN များကိုဖြစ်စေ Express သို့မဟုတ်ဆိုလိုဖြစ်ကြသည်။ ကုမ္ပဏီမကုမ္ပဏီများနှင့်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Associates မ SERVICE, သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုဒါမှမဟုတ် SERVICE ကိုရယူမညျသညျ့အရာပြီးစီး, လုံခြုံရေး, ယုံကြည်စိတ်ချရသော, အရည်အသွေး, တိကျမှုသို့မဟုတ်မရရှိနိုင်ပါရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူမည်သည့်အာမခံ OR ကိုယ်စားပြုစေသည်။ အထက်ပါကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, ကုမ္ပဏီနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏မဟုတ်သလိုမည်သူမဆို Associates မဟုတ်ကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ်လုပ်ငန်း, သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုဒါမှမဟုတ် SERVICE ကိုရယူသည့်အရာများန်ဆောင်မှုသောတိကျမှန်ကန်, ပြည့်စုံ, အသုံးဝင်သော, ယုံကြည်စိတ်ချရသော, အမှား-အခမဲ့သို့မဟုတ်မပြတ်မတောက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုရမ်း, သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒါမှမဟုတ် SERVICE ကိုရယူသည့်အရာများ THE ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အိုင်တီရရှိနိုင်စေသည်ဆာဗာဗိုင်းရပ်စ် OR အခြားသတင်းများအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အစိတ်အပိုင်းများအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း, ချွတ်ယွင်းချက်များကိုဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဟု, အတွက် configuration တွင်သို့မဟုတ်သင်သုံးတဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲသို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့်ဆောင်ရွက်နေခြင်းသို့မဟုတ်မညျ ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုရယူသည့်အရာများမဟုတ်ရင်သင့်လိုအပ်ချက် OR မျှော်လင့်ထားတွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည်။ အမှုသတင်းအချက်အလက်များ, DATE ရက်နေ့ထဲကဖြစ်နိုင်ပြီး, အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်သတင်းအချက်အလက်များ update လုပ်ဖို့မကျူးလွန်စေသည်။
ကုမ္ပဏီဤဥပဒေအထူးရည်ရွယ်ချက်ကုန်သည် non-ချိုးဖောက်မှုနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးမဆိုအာမခံကန့်သတ်ထားအပါအဝင်မဟုတ်ပါ, ကိုမဆိုအားလုံးအာမခံ, ဟုတ်မဟုတ် EXPRESS DISCLAIMS OR ဆိုလို, ပြဌာန်းသို့မဟုတ်အခြား။ အထက်ပါ Applications ဥပဒေအရဖယ်ထုတ်လိုက် OR ကန့်သတ်မရနိုင်သည်ကိုမဆိုအာမခံမထိခိုက်ပါဘူး။
9.3 ။ တာဝန်ဝတ္တရားအပေါ်ကန့်သတ်
နှင့် SERVICE ကို၎င်း၏အကြောင်းအရာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့်ရရှိသောမညျသညျ့အရာအသုံးပြုမှုမိမိရဲ့ access သင်၏ကိုယ်ပိုင်တာဝန်ယူမှု IS ။ NO EVENT သည် IN ကုမ္ပဏီ၎င်း၏ Affiliate, လိုင်စင်ရနှင့် Service Provider ပါလိမ့်မယ်, သူ့ရဲ့နှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာရုံး, ဒါရိုက်တာ, စီမံခန့်ခွဲမှု, အလုပျသမား, ရှယ်ယာရှင်များ, ကန်ထရိုက်တာ, Agent, ကိုယ်စားလှယ်များ, လိုင်စင်ရ, ပေးသွင်းသူများ, ကိုဆက်ခံ AND assign (Collection, THE "ထုတ်ပြန်ခဲ့သောပါတီ ") ဥပဒေရေးဆိုင်ရာထဲကသို့မဟုတ်သင့် ACCESS နှင့် ဆက်စပ်. ပေါ်ထွက်လာသောသီအိုရီ, အသုံးပြုမှု, သို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်နိုင်ခြင်း, ဝန်ဆောင်မှု, အိုင်တီဆက်စပ်ဘယ်ဆိုက်ကို, ဆို CONTENT အောက်မှာမဆိုကြင်နာမှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်သင်သို့မဟုတ် third party ခံထိုက်ပေ၏ BE ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်မည်သည့် Direct, သွယ်ဝိုက်, အထူးစကားမစပ်, လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု OR ပြစ်ဒဏ်ခတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအပါအဝင် SERVICE ကိုရယူတခြားပစ္စည်းများ, ကန့်သတ်ထားအပါအဝင်မဟုတ်ပါ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒဏ်ရာ, နာကျင်မှုနဲ့ဆငျးရဲဒုက်ခ, စိတျဖိစီး, ဝင်ငွေဆုံးရှုံးမှု, အမြတ်ဆုံးရှုံးမှု, အနိုင်ရရှိတဲ့ဆုံးရှုံးမှု, (ပေါ့ဆမှုအပါအဝင်) တရားမျှတမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရှိမရှိလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်မျှော်လင့်ကယ်တင်အသုံးပြုမှုဆုံးရှုံးမှု, ချစ်ကြည်ရေးဆုံးရှုံးမှု, ဒေတာဆုံးရှုံး, ဆုံးရှုံးမှု, သဘောတူစာချုပ်၏ချိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားတောင်မှကာလတွင် IF ။ THE ထုတ်ပြန်ခဲ့သောပါတီယငျးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ACCESS OR အသုံးပြုနည်း RELATED ရှိမရှိ, ဝန်ဆောင်မှုများ၏ content တွင်အမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်ပျက်ကွက် FOR သို့မဟုတ်မည်သည့်ပျက်စီးမှု OR ပစ္စည်းကိရိယာများ, mobile devices, programming, FILES သို့မဟုတ်အခြား property တွေနဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မ liabilities OR တာဝန်ယူ THE ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အိုင်တီဆက်စပ်ဘယ်ဆိုက်ကို။
၎င်း၏ထိန်းချုပ်မှုအလွန်အကြောင်းတရားများ BY အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားခြင်းမှကာကွယ်လိုလျှင်ထပ်ဆင့်, NO EVENT သည် IN ကုမ္ပဏီ, ထီထိုး purchasing OR အနိုင်ရရှိတဲ့စုဆောင်းန့်သတ်အပါအဝင်မဟုတ်ပါ, အသုံးပြုမှုဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတစ်ခုအောက်တွင်တာဝန်ဖျော်ဖြေ IN ပျက်ကွက် OR DELAY FOR ခံရမည် ထိုကဲ့သို့သော Force MAJEURE EVENT သည်သို့မဟုတ်မည်သည့်ထီကော်မရှင်သို့မဟုတ် ORGANIZATION, သို့မဟုတ်မည်သည့်ဗဟို, ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရ၏ action AS ။
အသုံးပြုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို IN မဟုတ်ရင်ထောက်ပံ့ မှလွဲ. THE ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာပေးမယ်လို့ပလ္လင်နှင့် ဆက်စပ်. ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်မကျေနပ်မှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက့်၏ကုစားန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းရပ်တန့်ဖို့ IS ။ ဒီဝန်ဆောင်မှုသုံးသင့်ခွင့်ပြုချက်ကိုအလိုအလျောက်ကုမ္ပဏီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို AT သတိပေးခြင်းမရှိပဲရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။
အသုံးပြုမှုဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များပုဒ်မ 10 အောက်တွင်သင့်လျော်ကြေးတာဝန်ဝတ္တရားများကိုချိုးဖောက်ခြင်း မှလွဲ. NO EVENT သည်ဖြစ်စေပါတီ liabilities အကြီးဖြစ်သောသူ (ငါ) ခြောက် (6) လအတွင်းသင် COMPANY ဖြင့်, အခပေးပမာဏထက် ချက်ချင်းတရာ ($ 100.00) ဒေါ်လာ (II ကို) ထိုသို့သော liabilities မှမြင့်တက်ပေးတော်မူသော EVENT သည်ရှေ့အ OR ။ အထက်ပါ Applications ဥပဒေအရဖယ်ထုတ်လိုက် OR ကန့်သတ်ထားလို့မရနိုင်ပါမည်သည့် liabilities မထိခိုက်ပါဘူး။
သငျသညျထဲကပေါ်ထွက်လာသောသို့မဟုတ်ဤသင့်ရဲ့ချိုးဖောက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း (ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရှေ့နေများ '' အဖိုးအခအပါအဝင်) မည်သည့်တောင်းဆိုချက်များ, liabilities, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, တရားစီရင်ပိုင်, ဆု, ဆုံးရှုံးမှု, ကုန်ကျစရိတ်, ကုန်ကျစရိတ်သို့မဟုတ်အခကြေးငွေထဲကနေနှင့်ဆန့်ကျင်အန္တရာယ်ကင်းသည့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူပါတီများ, ခုခံကာကွယ် indemnify နှင့်ကျင်းပရန်သဘောတူ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု၏အကြောင်းအရာနှင့်အမျှဖော်ပြသုံးစွဲမှုသည်ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်, သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုမှရရှိသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုထက်အခြားထုတ်ကုန်မဆိုသုံးစွဲခြင်းမှကန့်သတ်ထားအပါအဝင်, ဒါပေမယ့်မ of Service ကိုသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုများ၏အခြေအနေများ။ သငျသညျ indemnification hereunder ပေးတာဝန်ရှိသည်ဟုနေတယ်ဆိုရင်, ကုမ္ပဏီ, သူ့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောနှင့်အကြွင်းမဲ့အာဏာသမ္မာသတိရှိသင့်ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်မှာမဆိုပြောဆိုချက်ကို၏သဘောထားကိုထိန်းချုပ်စေနိုင်သည်။ အထက်ပါ၏န့်အသတ်မရှိဘဲသင်သည်ကုမ္ပဏီ၏ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်မပါဘဲ, အပေးအယူအခြေချသို့မဟုတ်မည်သည့်အရေးဆိုမှု၏အခြားမည်သည့်ထုံးစံတစ်ခါသုံးအတွက်မည်မဟုတ်။ သငျသညျ indemnification hereunder ပေးတာဝန်ရှိသည်ဟုနေတယ်ဆိုရင်, ကုမ္ပဏီကြောင့်မဟုတ်ရင်သင့်ရဲ့လျော်ကြေးတာဝန်ဝတ္တရားကိုထေမိရန်သင့်အားစေရန်လိုအပ်ပါသည်မဆိုငွေပေးချေနှိမ်လိမ့်မည်။
ကုမ္ပဏီ, လုပ်ငန်း, ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အသုံးပြုခြင်းနှင့် (တစ်ဦးချင်းစီအမှု၌, Non-သဘောတူထားသောအငြင်းပွားမှုများသို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုများအပါအဝင်) မည်သည့်အငြင်းပွားမှုသို့မဟုတ်ပြောဆိုချက်ကို သို့ဖြစ်. ပေါ်ထွက်လာသောသို့မဟုတ်ရမညျ related ၏အခြေအနေများနှင့်စပ်လျဉ်းအားလုံးကိစ္စရပ်များကြောင့်အုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်အတူအညီဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်ရကြလိမ့်မည် ဥပဒပြဌာန်းချက်သို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်မှုကိုမဆိုရှေးခယျြမှုသို့မဟုတ်ပဋိပက္ခမှအကျိုးသက်ရောက်ပေးခြင်းမရှိဘဲကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၏ပြည်တွင်းရေးဥပဒေများကို။
သငျသညျ၎င်းငျး၏တစ်ဦးတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်နှင့်ဖက်ဒရယ်အနုညာတစီရင်အက်ဥပဒေနှင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အနုညာတစီရင်နှင့်အညီ, ကုမ္ပဏီရွေးကောက်အဖြစ်အားလုံးထိုကဲ့သို့သောအငြင်းပွားမှုများနှင့်တောင်းဆိုမှုများဆန်ဖရန်စစ္စကို, ကယ်လီဖိုးနီးယား၏ City နှင့်ကောင်တီအတွင်းရှိခုံသမာဓိသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောသည်အခြားတည်နေရာအလိုက်အခြေချခံရကြလိမ့်မည်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သဘောတူ အမေရိကန်အနုညာတစီရင်အသင်းစည်းကမ်းများ။ သင်ကုမ္ပဏီဆန့်ကျင်နေတဲ့ပြောဆိုချက်ကိုသို့မဟုတ်တန်ပြန် file ဆိုရင်, လူတန်းစားအရေးယူခံဝန်အဖြစ်ကိုအခြားအသုံးပြုသူများနှင့်တစ်ဦးချင်းအခြေခံပေါ်မှာအဲဒီလိုမဟုတျဘဲသဘောတူသည်။ အဆိုပါခုံသမာဓိရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဗိုလ်လုပွဲနှင့်ပါတီများအပေါ် binding ဖြစ်ရလိမ့်မည်နှင့်အရည်အချင်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏မည်သည့်တရားရုံးတွင်စီရင်လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါပါတီများကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အတွက်, ဆန်ဖရန်စစ္စကို၏ City နှင့်ကောင်တီအတွင်းရှိမည်သည့်ဖက်ဒရယ်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်တရားရုံးမရောက်မီတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များနှင့်ကွင်းရန်သဘောတူသည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောတရားရုံးများအားဖြင့်သင်တို့ကိုကျော်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းမှဆိုအပေါင်းတို့နှင့်တကွကန့်ကွက်လည်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောတရားရုံးများတွင် venue ရန်။
မည်သည့်အငြင်းပွားမှုခုံသမာဓိဖြစ်ပေါ်သင့်ကြောင်းအဆိုပါဖြစ်ရပ်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောအငြင်းပွားမှုအတွက်ရေပန်းစားနေသောပါတီသည်အခြားပါတီအနေဖြင့်အားလုံးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကြေး, န့်အသတ်မရှိဘဲအပါအဝင်ရေပန်းစားပါတီမဆိုညာဘက်ပြဋ္ဌာန်း၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရှေ့နေများ '' အဖိုးအခပြန်လည်နာလန်ထူခွင့်ရကြလိမ့်မည် နှင့်ကုန်ကျစရိတ်, ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်၏တင်သည့်အပေါ်သို့နီးပါးရှိပါသည်ရှိသည်ဟုမှတ်ယူရမည်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအရေးယူစီရင်တရားစွဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေမပေးဆောင်ရကြလိမ့်မည်အားလုံးသော။ ထိုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မှုဝင်မဆိုတရားသဖြင့်စီရင်သို့မဟုတ်အမိန့်ရှေ့နေအခကြေးငွေနှင့်ထိုကဲ့သို့သောတရားသဖြင့်စီရင်ပြဋ္ဌာန်းအတွက်မည့်ကုန်ကျစရိတ်များပြန်လည်နာလန်ထူခြင်းနှင့်ပညတ်တရားအားဖြင့်ခွင့်အမြင့်ဆုံးနှုန်းမှာချိုးဖောက်သည့် နေ့မှစ. prejudgment အကျိုးစီးပွားတစ်ခုချီးမြှင့်ပေးမယ့်တိကျတဲ့ပြဌာန်းချက်ဆံ့ကြလိမ့်မည်။ ရှေ့နေစရိတ်များပါဝင်သည်ရကြလိမ့်မည်ဤအပိုင်းကို (ဈ) ၏ရည်ရွယ်ချက်, န့်အသတ်ခြင်းမရှိဘဲ, အောက်ပါအတွက်မြှုတ်အခကြေးငွေ (က), တရားသဖြင့်စီရင်လှုပ်ရှားမှု, (ခ) မထီမဲ့မြင်တရားစွဲဆိုမှု, (ဂ) အပါအ, ကောက်ခံခြင်းနှင့်မြီစားများနှင့် Third-party စာမေးပွဲ post (ဃ) ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့် (င) ဒေဝါလီခံတရား, နှင့် (ii) ရေပန်းစားနေသောပါတီရှိသည်ဖို့ကတော့ရှေ့ဆက်အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သူပါတီနိုင်ကြသို့မဟုတ်ထုတ်ပယ်ခံရ, default အနေနဲ့သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်အားဖြင့်နိုင်သူကိုဆိုလိုရလိမ့်မည်။
တောင်းဆိုမှုများ file မှအချိန်အပေါ်ကန့်သတ်
လှုပ်ရှားမှုအတွက်များ၏အကြောင်းရင်းဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လှုပ်ရှားမှုအတွက်သို့မဟုတ်အရေးဆိုမှု၏ထိုကဲ့သို့သော CAUSE အပြီးအပိုင် IS, ACCRUES မဆိုလှုပ်ရှားမှုအတွက်အကြောင်းဒါမှမဟုတ်သင်ထဲကပေါ်ထွက်လာသော OR အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းရှိစေခြင်းငှါတောင်းဆိုမှုများ ONE အတွင်းစတင်ရမညျ (1) နှစ်အကြာ ပိတ်ပင်။
သင်ဝင်ငွေသတင်းပို့နှင့်အမေရိက၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနှငျ့သငျနေထိုင်တိုင်းပြည်အတွက်သင့်လျော်သောဖက်ဒရယ်, ပြည်နယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကြောင့်မည်သည့်အခွန်အခများပေးဆောင်ဖို့တာဝန်ရှိဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံ။ သငျသညျနောက်ထပ်တစ်ခုသက်ဆိုင်သောထီအဖွဲ့အစည်းကသင့်ရဲ့အနိုင်ရရှိတဲ့တစ်ဦးသောအဘို့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်သင့်ကိုယ်စားသင့်လျော်သောခှဲခှငျ့အာဏာကိုက forward စေခြင်းငှါဝန်ခံ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်အမျိုးသားကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအက်ဥပဒေ၊ ၁၅ USC 15-7001 ရှိအီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်ပေါင်းအက်ဥပဒေသည်သဘောတူညီချက်အားအကောင်အထည်မဖော်မီထိရောက်သောကုမ္ပဏီနှင့်အီလက်ထရောနစ်သဘောတူညီချက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်သင်သဘောတူရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကုမ္ပဏီနှင့်အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပါကသင်သည်စာရွက်စာတမ်းလျှောက်လွှာ / သဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုတင်ပြရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်နှင့်ကုမ္ပဏီအကြားသဘောတူညီချက်တစ်ခုလုံးကိုအီလက်ထရောနစ်မှတ်တမ်းဖြင့်သက်သေပြလိမ့်မည်။ သင်ကအီလက်ထရောနစ်မှတ်တမ်းတစ်ခုအသုံးပြုရန်သဘောတူပြီးဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုဖတ်ရှုနားလည်ရန်သဘောတူရမည်။ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီး ၀ န်ဆောင်မှု၏မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူဖြစ်လာပြီးနောက်သင်အီလက်ထရောနစ်မှတ်တမ်းကိုအသုံးပြုရန်သင်၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကကုမ္ပဏီနှင့်သင်၏အကောင့်ကိုအလိုအလျောက်ရပ်ဆိုင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမည်သည့်နောက်အနိုင်ရလဒ်အတွက်မဆိုလုပ်ခအားလုံးကိုသင်ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏သဘောတူညီချက်အားအီလက်ထရောနစ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုတည်းကိုသာအသုံးပြုခြင်းအားရုပ်သိမ်းလိုပါကသင်၏အသုံးပြုသူအကောင့်ကိုပယ်ဖျက်ပြီး support@lottery.com သို့အီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့်သင်ထိုသို့ပြုလုပ်ရမည်။ သင်၏တောင်းဆိုချက်တွင်သင်၏အမည်၊ သင်၏မေးလ်လိပ်စာနှင့်အီးမေးလ်တို့ပါ ၀ င်ရမည်။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မှတဆင့်တင်ပြသတင်းအချက်အလက်များတစ်ခုတည်းကိုသာယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ရရှိနိုင်၏။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဤအချက်အလက်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကို, ပြည့်စုံသို့မဟုတ်အသုံးဝင်မှုခိုင်လုံပါဘူး။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်အပေါ်နေရာမဆိုမှီခိုအားထားသင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာတင်းကြပ်စွာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအသင်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုအခြားအသုံးပြုသူ, ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမဆို၏အကြောင်းကြားစေခြင်းငှါသူမည်သူမဆိုအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများအပေါ်ထားရှိမဆိုမှီခိုအားထားရာမှပေါ်ထွက်လာသောအားလုံးတာဝန်ယူမှုနှင့်တာဝန်မယူပါ။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်တတိယပါတီ၏ကြော်ငြာများ (ဒေတာ၊ သတင်းအချက်အလက်၊ အပလီကေးရှင်းများနှင့်အခြားထုတ်ကုန် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်) တတိယပါတီအကြောင်းအရာများကိုပြသနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ပြသနိုင်သည်သို့မဟုတ်တတိယပါတီကြော်ငြာမှတစ်ဆင့်၊ -Party ပစ္စည်းများ ") ။ မူပိုင်ခွင့်လိုက်နာခြင်း၊ တရား ၀ င်ခြင်း၊ လျောက်ပတ်စွာ၊ အရည်အသွေးသို့မဟုတ်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်တတိယပါတီပစ္စည်းများအတွက်ကုမ္ပဏီတွင်တာ ၀ န်မရှိပါဟုသင်အသိအမှတ်ပြုသည်။ သင်သို့မဟုတ်တတိယပါတီပစ္စည်းများအတွက်သင်သို့မဟုတ်အခြားလူသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်၊ တတိယပါတီပစ္စည်းများနှင့်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလင့်ခ်များသည်သင့်အတွက်အဆင်ပြေစေရန်တစ်ခုတည်းကိုသာပံ့ပိုးပေးပြီးသင်သည်သင်ကိုယ်တိုင်အန္တာရာယ်ရှိသည့်အရာများကိုအသုံးပြုပြီးသင်နှင့်တတိယပါတီ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာသည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယား Code ကိုပုဒ်မ 1789.3 ခြင်းဖြင့်လိုအပ်သည့်အဖြစ်, ဒီအသိပေးစာ (ဈ) ကိုဝန်ဆောင်မှု Lottery.com, 5214F စိန် HTS Blvd #1052 ဆန်ဖရန်စစ္စကို,, CA 94131 နှင့် (ii) တစ်ဦးအခကြေးငွေအချို့များအတွက်တရားစွဲဆိုခံရစေခြင်းငှါပေးကြောင်းကိုသင်အကြံပေးဖို့ဖြစ်တယ် ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်န်ဆောင်မှု; ကုမ္ပဏီမဆိုအခကြေးငွေသို့မဟုတ်တာဝန်ခံပမာဏကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်နှင့်အသစ်အခကြေးငွေသို့မဟုတ်စွဲချက်အစပြုနိုင်ဖို့သင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အသိပေးစာအပေါ်ထိရောက်သောပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. တိုင်ကြားချက်ရှိသည်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအပေါ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်အလိုရှိကြသည်တွင်ရှိလျှင်, support@lottery.com ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုမှုဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအတွက်ထွက်ကိုသတ်မှတ်မဆိုသက်တမ်းသို့မဟုတ်အခြေအနေကုမ္ပဏီထိုကဲ့သို့သောသက်တမ်းသို့မဟုတ်ခွအေနအေသို့မဟုတ်အခြားဝေါဟာရကိုသို့မဟုတ်အခြေအနေတစ်ဦးစွန့်လွှတ်တဲ့နောက်ထပ်သို့မဟုတ်ဆက်လက်စွန့်လွှတ်မှတ်ယူရမည်ဖွငျ့၏စွန့်လွှတ်ခြင်း, ရန်ကုမ္ပဏီမဆိုပျက်ကွက်ခြင်းမရှိပါ အသုံးပြုမှုဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအောက်တွင်တစ်ဦးညာဘက်သို့မဟုတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်အခိုင်အမာထိုကဲ့သို့သောလက်ျာဘက်သို့မဟုတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုစွန့်လွှတ်ဖွဲ့စည်းရမည်မဟုတ်။
အသုံးပြုမှုဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များမဆိုပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်စုံတစ်ရာအကြောင်းပြချက်များအတွက်, မမှန်ကန်တဲ့တရားမဝင်သို့မဟုတ်မပြုနိုင်ဖြစ်အရည်အချင်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏တရားရုံးသို့မဟုတ်အခြားခုံရုံးအားဖြင့်ကျင်းပလျှင်, ထိုကဲ့သို့သောပြဋ္ဌာန်းချက်ထိုကဲ့သို့သော၏ကျန်ရှိသောပြဌာန်းချက်ကြောင့်နိမ့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိဖျက်သိမ်းသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ခံရကြလိမ့်မည် သုံးစွဲမှုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအပြည့်အဝတပ်ဖွဲ့နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီကဒီသဘောတူညီချက်အောက်မှာမြေတပြင်လုံး၌ဖြစ်စေတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်အသိပေးစာမပါဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းဖို့သင်နှင့်သင်၏သဘောတူညီချက်မပါဘဲ၎င်း၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရား assign လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောတာဝန်ကျတဲ့အပျေါမှာ, ကုမ္ပဏီ hereunder ဆိုနောက်ထပ်တာဝန်၏စိတ်သက်သာရာရနိုင်ပါသည်။ သငျသညျ assign သို့မဟုတ်လွှဲအပ်အသုံးပြုမှုဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအောက်တွင်မည်သည့်အခွင့်အရေးများသို့မဟုတ်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ၏ကြိုတင်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်မပါဘဲ, သင်အားဖြင့်မည်သည့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတာဝန်ကျတဲ့နေရာနှင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုပယ်ခြင်းနှင့်ထိရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်မည်မဟုတ်ပါ။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်သင်နှင့်ကုမ္ပဏီအကြားအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ မိတ်ဖက်သို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်ဆက်နွယ်မှုမရှိကြောင်းသင်အသိအမှတ်ပြုသည်။ ကိုယ်စားလှယ်၊ အေးဂျင့်၊ အော်ပရေတာ၊ ဖြန့်ချိသူသို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမရပ်တည်ရန်သင်သဘောတူသည်။ သင်၏ကိုယ်စားပြုမှုများ၊ လုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်မှုများအတွက်ကုမ္ပဏီသည်ကုမ္ပဏီတွင်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အသုံးပြုမှုအခြေအနေများတွင်အတိအလင်းဖော်ပြထားခြင်း မှလွဲ၍ တတိယပါတီအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ မှလွဲ၍ သင်သဘောတူလက်ခံသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီန့်အသတ်, အစွန်းရောက်ရာသီဥတုနှငျ့ဘုရားသခငျ၏အခြားလုပ်ရပ်များ, သဘာဝဘေးအန္တရာယ်, စစ်, အကြမ်းဖက်ဝါဒ, အဓိကရုဏ်း, ပိတ်ပင်ထားမှုကိုဖြေ၏လုပ်ရပ်များခြင်းမရှိဘဲ, အပါအဝင်မည်သည့်နှောင့်နှေးသို့မဟုတ်ယင်း၏အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပရှိမမြင်နိုင်တဲ့ခွအေနမြေားသို့မဟုတ်အကြောင်းတရားများကနေရရှိလာတဲ့ဖျော်ဖြေဖို့ပျက်ကွက်မှုအတွက်ထိုက်မဖြစ်ရကြလိမ့်မည် လူထုအခြေပြုသို့မဟုတ်အာဏာပိုင်များ, မီး, ရေကြီးမှု, ယာဉ်မတော်တဆမှု, ကွန်ယက်အခြေခံအဆောက်အဦများမအောင်မြင်မှုများ, ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်သပိတ်, ဒါမှမဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆောက်အဦ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထစ်ငေါ့သို့မဟုတ်နှေး၏ရှားပါးမှုစစ်တပ်, နှင့်အင်တာနက်သို့မဟုတ်အခြား network များ (တစ်ဦးချင်းစီ, တစ်ဦး "တပ်ဖွဲ့ Majeure Event") ၏ထစ်ငေါ့သို့မဟုတ်နှေးကွေး ။
ထီလက်မှတ်ဝယ်ယူခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ရွေးခြင်းနှင့်အနိုင်ရရှိခြင်းဖြန့်ဝေခြင်းအတွက်အောက်ပါကန့်သတ်ထားသည့်ရှေ့နေချုပ် (“ ရှေ့နေချုပ်”) ကိုသင်သဘောတူပါသည်။ အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စားလှယ်အားသင်၏ရှေ့နေ (“ ကိုယ်စားလှယ်”) အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်သင်သဘောတူသည် -
အဆိုပါအေးဂျင့်ထီလက်မှတ်သို့မဟုတ်အောက်ပါစာရင်းကောက်အင်အားကြီးဖို့ကန့်သတ်လက်မှတ်နှင့် ပတ်သက်. , သင့်ကိုယ်စားအာဏာအခွင့်အာဏာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြုမူခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းစခွေငျးငှါ:
တစ်ထီလက်မှတ် (များ) ၏သင်ပေးထားသောခဲ့ကြပြီးသိမ်းယူခြင်းရန်ပုံငွေများ, ဒါပေမယ့်မပေးပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူဝယ်ယူရန်;
သင့်လျော်တဲ့သိုလှောင်မှုစက်ရုံအတွက်ထီလက်မှတ် (s) ကိုသိမ်းဆည်းထားရန်,
သိုလှောင်မှုပမာဏသို့သူတို့ကိုငါနေရာအပိုင်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုယူနှင့်သင်၏ကိုယ်စားအနိုင်ရရှိတဲ့အဘို့ထိုသူတို့ရွေးနှုတ်တော်မူရန်အဖြစ်လိုအပ်သောဝယ်ယူမှု၏စီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်းမည်သည့်အချက်မှနှင့်ရန်ထီလက်မှတ် (s) ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းငှါ၎င်း, နှင့်
ကုမ္ပဏီဆုံးဖြတ်သည်ကဲ့သို့သောအသုံးအနှုန်းများပေါ်၌ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားတဲ့ကိစ္စရပ်များနှင့် ဆက်စပ်. အတွက်အေးဂျင့်များနှင့်ဝန်ထမ်းများထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပယ်ချရန်။
သင်သည်သင်၏ designated တမန်များနှင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကုမ္ပဏီသတ်မှတ်ပေးရန်နှင့်သင့်ထီလက်မှတ် (s) ကိုဝယ်ယူခြင်းနှင့်သိုလှောင်ရန်သင့်ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန်ကုမ္ပဏီလုပ်ပိုင်ခွင့်မှမဆိုတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ် Group မှစုဆောင်းအနိုင်ရရှိတဲ့ Play နှင့်သင့်တဦးချင်းသို့မဟုတ် Group မှသင့်ရဲ့သို့အနိုင်ရရှိတဲ့ Play နေရာသဘောတူ သုံးစွဲသူအကောင့်။
တတိယပါတီကိုယျစားလှယျခွင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်. အားလုံးကိစ္စရပ်များမှအဖြစ်အေးဂျင့်များ၏ကိုယ်စားပြုအပေါ်သို့အားကိုးနိုငျသညျ။ အဆိုပါအေးဂျင့်များ၏ကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ်ရှေ့နေချုပ်၏ဤပါဝါအောက်မှာခွင့်ပြုခဲ့သည့်အခွင့်အာဏာအပေါ်မှီခိုအတွက်ပြုမူသူကိုအဘယ်သူမျှမလူတစ်ဦးရှေ့နေချုပ်ရဲ့ Power ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုကြိုတင်အမှန်တကယ်အသိပညာမှမဆိုအာဏာကိုကငျြ့သုံးဖို့အေးဂျင့်ခွင့်ပြုဘို့ကိုသင်သို့မဟုတ်သင့်အိမ်ခြံမြေမှမဆိုတာဝန်ယူမှုကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟု ရုတ်သိမ်းသို့မဟုတ်ရပ်စဲပညတ်တရား၏စစ်ဆင်ရေးအားဖြင့်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်။
ရှေ့နေချုပ်၏ဤပါဝါအတွက်အမည်ရှိသို့မဟုတ်အစားထိုးခြင်းမရှိပါအေးဂျင့်ရှေ့နေချုပ်၏ဤပါဝါအောက်မှာသရုပ်ဆောင်ကနေသရုပ်ဆောင်သို့မဟုတ်ဘဲအဘို့အသငျသညျမဆိုတာဝန်ယူမှုကိုခံရကြလိမ့်မည်။ သငျသညျဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားတဲ့အင်အားကြီးလေ့ကျင့်ခန်း၏ရလဒ်အဖြစ်မြှုတ်ဖြစ်ကြောင်းဆိုတရားရုံးကုန်ကျစရိတ်များ, အရပ်ဘက်တရားစီရင်ပိုင်, ဒါမှမဟုတ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရှေ့နေစရိတ်များအတွက်ရှေ့နေချုပ်၏ဤပါဝါအတွက်အမည်ရှိသို့မဟုတ်အစားထိုးအန္တရာယ်ကင်းမဆိုအေးဂျင့် indemnify နှင့်ကျင်းပရန်သဘောတူသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီဖော်ပြဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားဆိုထီလက်မှတ် (များ) ၏ပိုင်ဆိုင်မှု disclaims ။ အမိန့်အားလုံးဥပဒေရေးရာအခွင့်အရေးနှင့်ထီလက်မှတ်တွေ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နေရာသူကိုမှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများစနစ်တကျ, သုံးစွဲမှုသည်ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များမှဘာသာရပ်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သုံးစွဲမှုအခြေအနေ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီများနှင့်ရှေ့နေချုပ်မဆိုသက်ဆိုင်လီမိတက်ပါဝါလုပျငနျးမှလေးစားမှုနှင့်အတူသင်နှင့်ကုမ္ပဏီအကြားတစ်ဦးတည်းသောနှင့်တစ်ခုလုံးကိုသဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကိုဖွဲ့စည်းအပေါင်းတို့နှင့်ကြိုတင်နှင့်ခေတ်တစ်ခေတ်နားလည်မှု, သဘောတူညီချက်များ, ကိုယ်စားပြုမှုနှင့်အာမခံပယ်ဖျက်အစားထိုး, နှစ်ဦးစလုံးရေးသား အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုမှလေးစားမှုနှင့်အတူပါးစပ်။ အမြန်သို့မဟုတ်အဓိပ်ပာအသုံးပြုမှုများ၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအတွက်ဘယ်အရာကမှ, အပျေါမှာမဆိုအခွင့်အရေးများသို့မဟုတ်ကုစားအပ်နှင်းသည်ဟုမှတ်ယူမပါတီတွေမဆိုတာဝန်ရှိခံရကြလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ဆန့်ကျင်ဖို့ဖော်ပြထားမဟုတ်လျှင်, ထိုကဲ့သို့သောပါတီများ မှလွဲ. အခြားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းရန်, hereto ။